ဝက်သားကို ရေဆေးပြီး ကြိုက်နှစ်သက်သလို အတုံးလေးတွေတုံးပါ။ပြီးလျှင် ဆား၊ငံပြာရည် (သို့) စိမ်းစားငါးပိ၊နနွင်း အနည်းငယ်စီတို့ဖြင့် ရောနယ်ကာနာရီဝက်ခန့်နှပ်ထားပါ။ ပြီးနောက်ညက်အောင်ထောင်းထားသော ကြက်သွန်ဖြူ ၊ ကြက်သွန်နီနှင့် ငရုတ်သီးခြောက်တို့ကို အိုးထဲသို့ ဆီသင့်ရုံထည့်ကာ နနွင်းအနည်းငယ်ဖြင့် ဆီသတ်ပါ။ ကြက်သွန်ကြော်နံ့ မွှေးပြီးရွှေရောင်သန်းလာပါက နှပ်ထားသော ဝက်သားများကိုထည့်မွှေ၍ အိုးမကပ်အောင်မပြတ်မွှေကာ ဆီပြန်လာသည်အထိ မွှေပေးပါ။ ပွက်ပွက်ဆူလာလျှင် ရေမြုပ်အောင်ထည့်၍ တည်ထားပါ။မကြာခဏ အဖုံးဖွင့်၍ မွှေမွှေပေးပါ။ရေများ ပွက်ပွက်ဆူလာကာ ရေခမ်းပြီး ဆီပြန်လာလျှင် အနေတော်အရွယ် လှီးထားသော မျှစ်ချဉ်များကို ထည့်ပြီးမွှေပေးပါ။ မျှစ်ချဉ်အရည်လည်းအနည်းငယ် ထည့်ပေးပြီး အသားနှင့် မျှစ်ချဉ် နူးအောင် တည်ထားပေးပါ။ အရည်များ ပွက်ပွက်ဆူလာလျှင် အသားနူးမနူးမြည်းကြည့်ပြီး မနူးသေးပါက ရေအနည်းငယ်ထည့် ပြီး နူးအောင်ထပ်တည်ထားပါ။ အသားနှင့် မျှစ်ချဉ်များနူးပြီး ဆီပြန်လာလျှင် အပေါ့အငံမြည်းကာ အရသာကောင်းမွန်သော ဝက်သားနှင့်မျှစ်ချဉ်ဟင်းကို ငပိထောင်းနှင့် တွဲဖက်၍ သုံးဆောင်လျှင် အလွန်လိုက်ဖက်ပါတယ်။ ကြက်သားမှုန့်၊အရသာမှုန့်၊ဟင်းချိုမှုန့် ကြိုက်နှစ်သက်ရာနှင့် ထည့်ချက်ချင်လျှင် ထည့်ချက်လို့ရပါတယ်ရှင်။
ဘားကမ့် မန္တလေး ၂၀၁၄ ကျင်းပမည်
ယခင်နှစ် ဘားကမ့် မြင်ကွင်း
ဘားကမ့် မန္တလေး ၂၀၁၄ ကို ယခု လ ၁၅ ၊ ၁၆ ရက် နေ့ များ တွင်
မန္တလေး မြို့ ရွှေဖြူ ပလာဇာ ဒုတိယထပ် မှာ ကျင်း ပသွားမည် ဟု ဘားကမ့်ပွဲ ဖြစ် မြောက် ရေး အဖွဲ့ မှ သိရသည်။
ယခု ပွဲကို ရွှေဖြူ ပလာ ဇာ ဒုတိယ အထပ် တွင် အခန်း ၁၂ ခန်း ဖြင့် တစ် ပြိုင် နက် ပြောနိင်ရန်
စီစဉ် ထားပြီး ဆွေးနွေး ဟောပြော မည့် အ ကြောင်း အရာ တစ် ခုကို အချိန် ၄၅ မိနစ် ခန့် သတ်မှတ်ထားကြောင်း သိ ရသည်။
ပြီးခဲ့ တဲ့ နှစ် ဘားကမ့် မှာတုန်းက တော့ လူ ၃၉၀၀ ၊ ၄၀၀၀ လောက် တက်တယ် လုပ်ခဲ့တာတွေက
ရွှေဖြူ ပလာဇာမှာပဲလုပ် ခဲ့တာ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ကတည်း လုပ် ခဲ့တာ ဆို တော့ ယခု အကြိမ်က ၄ ကြိမ် မြောက် ပွဲ ပေါ့ ဟု
ဘားကမ့် ပွဲ စီစဉ်သူ တစ် ဦးဖြစ် သည့် ကို ပြည့်ဖြိုးမောင် က ပြောသည်။
နိုင်ငံတကာလုပ်ငန်းရှင်များ ရင်းနှီးမြုပ်နှံရန် စိတ်ဝင်စားလာသောကြောင့် ကျောက်စိမ်းကုန်ကြမ်း ရောင်းချသူအဆင့်မှ အချောထည်ရောင်းချသူအဆင့်သို့ ရောက်ရှိလာမည်
ရန်ကုန်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၈။
မြန်မာနိုင်ငံသည် နိုင်ငံတကာသို့ကျောက်စိမ်းရောင်းချရာတွင် ကုန်ကြမ်းရောင်းချနေသူ အဆင့်မှ နိုင်ငံတကာ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ လာရောက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံရန် စိတ်ဝင်စားမှုများရှိလာကြောင့် နောက်ပိုင်းတွင် ကျောက်စိမ်းအချောထည် ရောင်းချနိုင်သည်အထိ အဆင့်မြင့်တက်လာပြီး အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံများ၏ ဈေးကွက်ကို အားကိုးစရာမလိုဘဲ ကျော်တက် သွားနိုင်ကြောင်း ကျောက်မျက်ကုန်သည် တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်များအတွင်း မြန်မာ့ကျောက်စ်ိမ်းဈေးကွက်တွင် နည်းပညာအခက်အခဲ၊ ငွေကြေးအရင်းများ လိုအပ်ချက်ကြောင့် ကုန်ကြမ်းအဖြစ်သာ ရောင်းချရပြီး အိမ်နီးချင်း ထိုင်း၊ အိန္ဒိယနှင့် တရုတ်နိုင်ငံများ အပေါ်တွင်သာ မှီခိုအားထားခဲ့ရပြီး ထိုနိုင်ငံများသို့ ရောက်ရှိသွားသော မြန်မာ့ကျောက်စိမ်းများမှာ ၁၀ဆမှ ၁၅အထိ ဈေးနှုန်း မြင့်တက်သွားကြောင်း သိရသည်။
“ဒီကိုလာဝယ်တာ အများစုက ပွဲစားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်၊ သူတို့နိုင်ငံရောက်သွားရင် ဈေးကအဆမတန် တက်သွားတယ်၊အဲဒါဘာဖြစ်သလဲဆိုတော့ တရားဝင် ဈေးကွက်ကို ရှောင်ချင်နေကြလို့ အခွန်များတယ်လို့ တစ်ချို့ကလဲ ပြောနေကြတယ်”ဟု ကျောက်မျက် အရောင်းအဝယ် လုပ်ကိုင်နေသူ တစ်ဦးက ပြောသည်။
ကျောက်စိမ်းများကို ခေတ်အဆက်ဆက် အမြောက်အများ တူးဖော်ရရှိခဲ့သော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျောက်စိမ်းများ ဆက်လက် ထွက်ရှိသေးသည်ဖြစ်ရာ တရားဝင်စနစ်တကျ တူးဖော်ရန် လိုအပ်ကြောင်း သို့မဟုတ်ပါက သဘာဝ သယံဇာတများ ကုန်ခမ်းသွားနိုင်ပြီး နိုင်ငံတော်အတွက်လည်း များစွာဆုံးရှုံး နစ်နာနိုင်ကြောင်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပညာရှင်ဦးညိုမောင်က ပြောကြားသည်။
လက်ရှိတွင် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းမှ မြန်မာနိုင်ငံ၏ပြောင်းလဲမှုများကိုစိတ်ဝင်တစားစောင့်ကြည့်နေချိန်တွင်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များကလည်း မြန်မာ့ကျောက်မျက်လုပ်ငန်းကို စိတ်ဝင်တစား လုပ်ကိုင်ရန် ကမ်းလှမ်းမှုများ ရှိလာကြောင်း ကျောက်မျက်ရတနာ လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
မြန်မာ့ကျောက်မျက်လုပ်ငန်းကို အထူးစိတ်ဝင်စားသည့် နိုင်ငံများမှ ထိုင်ဝမ်၊ ဟောင်ကောင်၊ မလေးရှား၊ စင်္ကာပူ၊ တရုတ်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံများဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
AIDS နှင့် ကမ္ဘာ (၈)
အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ ရှုထောင့်ကနေပြီး AIDS ရောဂါ ကူးစက်မှုကို သုံးသပ်မယ်ဆိုရင် ၁၉၈၉-၉၀ မှာ AIDS ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘယ်နေရာမှ မကျန် ထောင့်စုံရောက်နေပါပြီ။ အစက အာဖရိက၊ အမေရိကနဲ့ အနောက် ဥရောပမှာ “ခဲ” ပြီး နေတာတွေ့ရတယ်။ အာရှမှာ သိပ်မရှိဘူး။ အခုဆိုရင်တော့ AIDS ဟာ အာရှတိုက်မှာ ခြေကုတ်ကောင်းကောင်း ရသွားပြီ။ ၁၉၉၀-၉၃ ခုနှစ်တွေအတွက် ပြောရရင်တော့ ခြေကုတ်ရရုံ မကတော့ဘဲ တစ်မုဟုတ်ချင်း ပွားလာလိုက်တာ အာဖရိကတိုက်ကို အမီလိုက်နေသလို ဖြစ်နေပါပြီ။
အထူးသဖြင့် ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်၊ မြာမာနဲ့ ရွှေတြိဂံ နယ်စပ် နေရာမှာဆိုရင် အတားအဆီး မရှိ တိုးနေတယ်လို့ ခန့်မှန်းရတယ်။ ကွင်းဆင်း စာရင်းကောက်မှုကို တိကျစွာ မလုပ်နိုင်သေးလို့သာ တိကျကိန်းဂဏန်းကို မပြောနိုင်တာ။ အဲဒီနေရာတွေကလည်း မူးယစ်ဆေးဝါး (နံပါတ်ဖိုး) ရလွယ်တဲ့ နေရာဆိုတော့ ထပ်ဆင့် ပြန်ပွားမှုတွင် ဘယ်လောက်တာသွားမယ်ဆိုတာ လွယ်လွယ်ပဲ စဉ်းစားလို့ ရပါတယ်။ မြန်မာမှာဆိုရင် ရှိဆဲနဲ့ ပွားနှုန်းကို ထည့်တွက်ပြီး ရတဲ့ ခန့်မှန်း ဂဏန်းကတော့ သက္ကရာဇ် ၂၀၀၀ မှာ မြန်မာရှိ HIV ပိုး ရှိနေသူဟာ အမေရိကန်နှင့် ထပ်တူထပ်မျှလောက် ရှိမှာတဲ့။
တောင်အမေရကနဲ့ ကရိဘီယံ (Caribbean) ကျွန်းစုတွေမှာ ဆိုရင်တော့ ကူးစက်မြန်နှုန်းမျိုးနဲ့ ဖြစ်နေလို့ အခြေအနေ တကယ်ဆိုးနေပြီ။ မြောက် အမေရက၊ အနောက်ဥရောပနဲ့ သြတတြေးလျ နီးနီး ဆိုးတာပဲလို့ ပြောကြတယ်။ တချို့နေရာမှာ ဆိုရင် ဒီတိုင်းပြည်တွေထက် ပိုဆိုးတယ်တဲ့။ ဒီတော့ AIDS ရောဂါဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါကြီး ဖြစ်သွားပြီ။
ဒီလို AIDS ပြန့်ပွားမှု ပြဿနာကြီးကို အချိန်လိုက် ပိုင်းပြီး သုံးသပ်ရင် မြင်နိုင်တာကတော့ ဒီ “ကူးစက်ပြန့်ပွားမှု” ကြီးကို အချိန် ကာလအလိုက် ၃ ပိုင်း ပိုင်းလို့ရတယ်။ ဒီအပိုင်းတွေကလည်း သမုဒ္ဒရာက ဒီရေလှိုင်းကြီးလို တစ်လှိုင်းပြီး တစ်လှိုင်း ဆက်တိုက်လာခံတယ်။ ပထမ ဦးဆုံးကလကတော့ AIDS ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဟာ လတွေထဲမှာ တရိပ်ရိပ် ပွားများ ကူးစက်ခဲ့တဲ့ ကာလအပိုင်း ဖြစ်တယ်။ လူတွေမှာ ဘာမှ လက္ခဏာ မရှိလို့ မသိခဲ့ ကြဘူး။ ရောဂါရဲ့ ပြတ်သား ထင်ရှားတဲ့ လက္ခဏာတွေဟာ ပိုးကိုယ်တွင်းရောက်ပြီး ၅ နှစ်နဲ့ ၁၀ နှစ်အတွင်းမှ သိသာလာတာ။
ဒီ ၅-၁၀ နှစ်အတွင်း မှာတော့ ပိုးဝင်ပြီး ဖြစ်ပေမယ့် အပြင်ပန်းအားဖြင့်တော့ လူကောင်းလိုပဲ နေကြမှာ ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလူတွေကို “တိုင်းဗုံး” (time bomb) လို့ ယူဆရမှာပါ။ သူတို့ကိုယ်တိုင် အချိန်တန်ရင် AIDS ရောဂါဖြစ်ပြီး သေကြရမယ်။ မသေခင်အတွင်းမှာ သူတို့ကနေ တစ်ပါးသူတွေကို ကူးစက်ပြန့်ပွားနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် ကမ္ဘာမှာ AIDS အခြေအနေ ဘယ်လိုရှိသလဲလို့ ခန့်မှန်းချင်ရင် ရောဂါတကယ် ဖြစ်နေသူတွေပါမက AIDS ပိုး ဝင်ပြီးသူ အရေအတွက်ကိုလည်း ထည့်ပြီး စဉ်းစားဖို့ လိုလိမ့်မယ်။
ကိန်းဂဏန်းအရ ပြောရမယ်ဆိုရင် (အထက်မှာလည်း တင်ပြပြီးတဲ့ အတိုင်း) AIDS ရောဂါရှိသူရော ပိုးဝင်ပြီး ဖြစ်နေသူရော ပေါင်းလိုက်ရင် ကမ္ဘာမှာ ၁၉၈၀-၁၉၈၅ ခုအတွင်းမှာ ၇၀၀၀၀ (ခုနှစ်သောင်း) ရှိတယ်။ ၁၉၈၆-၁၉၈၈ မှာ ၃၀၀၀၀၀ (သုံးသိန်း) ရှိတယ်။ ၁၉၈၉-၁၉၉၁ အတွင်းမှာတော့ ၇ သိန်း အထိ တက်သွားမယ်လို့ တွက်ချက်လို့ ရတယ်။ ၁၉၉၁ အဆုံးမှာတော့ ၁.၁ သန်း ရှိမယ်တဲ့၊ ၁၉၉၃ အဆုံးမှာ ၁၃ သန်း ရှိတယ်။
ဒုတိယ ကာလလှိုင်းကတော့ AIDS ရောဂါ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဖြစ်လာတဲ့ အပိုင်းပဲ။ ဒါကတော့ ဒုတိယ အဆင့်အနေနဲ့ ၁၉၈၂ လောက်က စပြီး AIDS ရောဂါလို့ မယ်မယ်ရရ သိလာကြပြီး ရောဂါ ကူးစက်မှုကြီးဟာ အရှိန်အဟုန်နဲ့ ပြန့်ပွားတဲ့ ဖြစ်ရပ်ပဲ။
တတိယ “ကူးစက်မှုလှိုင်း” ကတော့ နည်းနည်း ကျယ်ဝန်းတဲ့ ကိစ္စပါ။ လူတေါ ရုတ်တရက် စဉ်းစားမိကြမှာ မဟုတ်တဲ့ ကိစ္စပါ။ အဓိကအားဖြင့် AIDS အပေါ် လူအဖွဲ့ အစည်းနဲ့ ကမ္ဘာရှိ တိုင်းပြည်တွေမြင်ပုံ အမျိုးမျိုးကြောင့် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါ။ ရောဂါ သက်သက်နဲ့ ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စချည်း မဟုတ်တော့ပဲ လူမှုရေး၊ လူမှု ဆက်ဆံရေး ဘက်ကိုပါ ရောက်သွားခဲ့တယ်။ ဒီဖြစ်ရပ် အရင်းခံ အကြောင်းကတော့ မသိနား မလည်မှုမှ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ကြောက်ခြင်း တရားပါပဲ။ အရင် သမိုင်းဝင် ကပ်ရောဂါတွေမှာလည်း ဒီကြောက်ခြင်း တရား လူတွေအပေါ် ဘယ်လို လွှမ်းမိုးခဲ့တယ်ဆိုတာ မြင်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ အခု AIDS မှာလည်း ဒီလိုပါပဲ။
AIDS နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အတည်မပြုရသေးတဲ့ သတင်းတွေ၊ အခြေအမြစ် မရှိတဲ့ ကောလာဟလတွေကြောင့် မဆင်မခြင် ကြောက်ကြပြီး တွေးခေါ် သုံးသပ်မှုတွေမှာ အမြင်မမှန်တော့ပဲ အလွန်အကျွံတွေ ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ ဥပမာဆိုရင် AIDS ရောဂါပိုးရှိတဲ့ လူကို ထိမိရုံနဲ့ ရောဂါကူးတယ်လို့ ယူဆနေကြတယ်။ ဒီလို ခံယူချက် ရှိမရှိ မေးမြန်းလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာ မေးမြန်းခံရသူအနက် ၁၀% မှ ၃၀% တို့ဟာ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ရုံ၊ ဘတ်(စ)ကား အတူတူစီးရုံ၊ အလုပ်အတူတူ လုပ်ရုံနဲ့ AIDS ရောဂါ ကူးစက်နိုင်တယ်လို့ ယုံကြည်ကြတယ်။
ဒီတော့ မဖွယ်မရာတွေ ပြုမူကုန်ကြတယ်၊ ဖြစ်လာကြတယ်။ လူတွေဟာ AIDS ရောဂါရှင်တွေ အပေါ် ညှာတာစိတ်ကင်းမဲ့စွာ ဆက်ဆံကြတယ်။ ဒါကြောင့် ရောဂါရှင်တွေဟာ ရောဂါဆိုးကြီးရဲ့ ဖိစီးမှုဒဏ်ကို ခံရတဲ့အပြင် လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ လူ့သိက္ခာပါ ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရတယ်။ အလုပ်အကိုင်အရေး၊ ပညာသင်ကြားရေး၊ အိမ်ငှားမှုကိစ္စများ ခရီးသွားလာရေးတို့မှာပါ ထိခိုက်ခဲ့တယ်။ လူ့လောကမှာ နေစရာမရှိလောက်အောင်ပါပဲ။ ကြေကွဲစရာ ဖြစ်ရပ်ကလေး တစ်ခုကတော့ သြစတြေးလျမှာ ဖြစ်ခဲ့တယ်။
ကလေးငယ်မလေး တစ်ယောက်ဟာ ၈ နှစ်အရွယ်မှာ AIDS ရောဂါ ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒီလို AIDS ရောဂါ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သိရတာနဲ့ ဒုက္ခအမျိုးမျိုး စတော့တာပဲ။ သူက သွားနိုင် လာနိုင်ပါ။ ဒါပေမယ့် သူ့ကို ကျောင်းက လက်မခံတော့ဘူး။ အတန်းထဲက ကလေးတွေကလည်း ဆေးဖော်ကြောဘက် မလုပ်ဘူး၊ စကားမပြောဘူး၊ အထိမခံဘူး၊ လုံးဝ ပယ်ထားလိုက်ကြတယ်။ နောက်ဆုံး ကျောင်းမတက်ရဘူးလို့ ကျောင်းအာဏာပိုင်တွေက တားမြစ်လိုက်တယ်။ မိဘနဲ့ မိသားစု အားလုံးကလည်း အိမ်နီးနားချင်းနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က ပယ်ကြတယ်။
ကလေးနဲ့ မိသားစုပါ အလွန်တရာမှ စိတ်ဆင်းရဲ၊ လူဆင်းရဲ ဖြစ်ကြပြီး အဲဒီနေရာမှာ မနေနိုင်တဲ့အထိ ဖြစ်သွားတယ်။ ဒါနဲ့ နယူးဇီလန်ပြည်ကို ပြောင်းသွားပြီး၊ မြို့ကလေးတစ်မြို့ရဲ့ တောပိုင်းမှာ သွားနေကြတယ်။ ၁၉၈၉ မှာဆိုရင် အဲဒီနေရာမှာ နေတာ တစ်နှစ်ကျော် ရှိသွားပြီ ကလေးကတော့ အခြေအနေကောင်းနေဆဲပဲ လှုပ်ရှားသွားလာနိုင်ရုံ မကသေးဘဲ မြင်းတောင် စီးနေနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ၁၉၉၃ ခုထဲမှာ ဆုံးသွားရှာတယ်။ AIDS ကြောင့် သူ့ခမျာမှာ လူမသေခင်က ဘဝဆုံးသလို ဖြစ်နေပြီး မိဘတွေမှာလည်း အခြေပျက်ပြီး စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနဲ့ စိတ်ဓာတ်ပါ ဆုံးရှုံးမှုတွေ အပြည့်နဲ့ ဖြစ်သွားရတယ်။ ဒါဟာ တရားမဲ့စွာ မမှန်မကန်ဘဲ လူ့အခွင့်အရေးကို ဆုံးစေခဲ့တဲ့ အပြင် ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးမှာလည်း အကြီးအကျယ် အနှောင့်အယှက် ဖြစ်တယ်။
ဆီးဂိမ်းစ်ပြိုင်ပွဲ ပိတ်ပွဲအခမ်းအနားတွင် လုပ်အားပေးလူငယ်များအား တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ-ညီညီစိုးညွန့်)
“ငါ့လူရ။ လူဆိုတာ ကိုယ့်ဘာသာ တစ်ကိုယ်ရေတစ်ကာယ တစ်ယောက်တည်းနေတော့ ဂရုစိုက်ရတာ တိုက်ရိုက်အားဖြင့် ပြောရရင် တစ်ယောက်တည်းပေါ့ကွာ။ ဒါတောင်မှ မိဘတွေ၊ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေ ရှိသေးသကွ။ အေး မိန်းမယူလိုက်ပြီ ဆိုရင်တော့ မိန်းမနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုက မိဘတွေရှေ့ကို ရောက်လာသကွ။ မင်းဘာသာ မင်းလက်ခံချင်ရင် လက်ခံ၊ လက်မခံချင်ရင်နေ။ ငါက ငါ့ဘ၀နဲ့ ထင်ဟပ်ပြီးပြောတာ”
စာဆိုတာ သေစာ၊ ရှင်စာလောက်ပဲတတ်တဲ့ ဦးလေးရဲ့ ပြောစကား။ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောရရင် ဦးလေးရဲ့ ဘ၀အခြေခံ ဒဿန။
“လူဆိုတာ ကိုယ့်နောက်မှာ ပရိသတ်များလေလေ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မပိုင်လေလေပဲ” ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ စွယ်စုံရ အနုပညာရှင် ၀င်းဦးရဲ့ ပြောစကားတစ်ခွန်းပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မပိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ လွတ်လပ်မှု ဆုံးရှုံးခြင်းသာ မကပါဘူး။ တာဝန်ယူခြင်းဆိုတဲ့ ကိစ္စကပါ နောက်ကနေ ထက်ကြပ်မကွာ ပါလာပါတယ်။
ကိုယ့်နောက်မှာရှိတဲ့ ပရိသတ်တွေ၊ လူတွေများပြားခြင်းဆိုတာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ပါ။ အနုပညာနယ်ပယ် အသီးသီးက အနုပညာရှင်တွေ အတွက်တော့ သူတို့ရဲ့ အနုပညာကို နှစ်သက်လို့ဖြစ်မှာပါ။ လူမှုရေး အသင်းအဖွဲ့တွေမှာ ရှေ့ဆောင်ရှေ့ရွက် ပြုနေသူတွေကိုတော့ သူတို့ရဲ့ လုပ်ရပ်ကို လေးစားလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေး နယ်ပယ်က ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့နောက်က ပရိသတ်တွေကတော့ သူတို့ကို ယုံကြည်အားကိုးလို့ပါပဲ။
ဌာနဆိုင်ရာ အကြီးအကဲတွေရဲ့နောက်မှာ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းတွေရှိသလို စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေရဲ့နောက်မှာ ၀န်ထမ်းတွေရှိပါတယ်။ ဘာကြောင့် နောက်မှာပရိသတ်တွေ ရှိနေကြသလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းရင်း ကွာချင်ရင်ကွာပါမယ်။ ရှေ့ကပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ တာဝန်ရှိကြတာချင်း အတူတူပါပဲ။
“တာဝန်ရှိတဲ့နေရာရောက်ရင် တာဝန်ယူရမှာကွ။ အခုတော့ တာဝန်မယူတဲ့အပြင် ခဏရောက်လာတဲ့ နေရာမှာ ငါအာဏာရှင်၊ ငါထင်တာ ငါလုပ်မယ်။ ဘယ်သူ့မှ ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုတဲ့ ပုံမျိုးတော့ မချိုးစကောင်းပါဘူး။
မိတ်ဆွေ ဂေါက်သီးရိုက်သမားတစ်ယောက်ရဲ့ မြည်တွန်တောက်တီးသံ ကြားတာနဲ့ ဂေါက်ကွင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ ဖြစ်မှာပဲလို့ စုံထောက်မောင်စံရှား စဉ်းစားပုံမျိုးနဲ့ စိတ်ထဲက ကောက်ချက်ချမိတယ်။
“ဆိုစမ်းပါဦး သူငယ်ချင်းရေ။ ဘယ်သူ့ကို ဘာများမကျေမနပ် ဖြစ်နေရတာလဲ”
“ဘယ်သူရမှာလဲကွာ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့။ ဂေါက်ကွင်းထဲ ဂေါက်သီးရိုက်ချိန်မှာ ဘောင်းဘီတိုနဲ့ ကစားခွင့်မပြုဘူးတဲ့ကွာ။
“ဟာ ဒီစည်းကမ်းက အရင်ကတည်းက ရှိပြီးသား မဟုတ်ဘူးလား။ တီရှပ်နဲ့ မရိုက်ရတို့၊ ကော်လာပါတဲ့စပို့ရှပ် ဒါမှမဟုတ် လည်ထောင်စပို့ရှပ်ကိုပဲ ခွင့်ပြုမယ်တို့လေကွာ”
“အရင်ကတည်းကရှိတာ၊ နိုင်ငံတကာမှာ ကျင့်သုံးတာက ဒူးပေါ်တဲ့ ပေါင်လယ်လောက်ပဲရှိတဲ့ လက်ဝှေ့ဘောင်းဘီမျိုးကို ပြောတာ။ အခု သူတားမြစ်တာက ဒူးဖုံးတဲ့ ဘောင်းဘီတွေ၊ သရီးကွာတားတွေပါ။ ခွင့်မပြုဘူးပြောတာ။ နောက်ပြီး ငါတို့က အလကား အသင်းဝင်လက်မှတ်ရပြီး အလကား လာရိုက်နေတဲ့လူတွေ မဟုတ်ဘူး။ ပိုက်ဆံသိန်းပေါင်းများစွာပေးပြီး အသင်းဝင်ထားတဲ့ အသင်းသားတွေ။ ပြောရရင် သူက၀န်ထမ်း။
“အခု သူမ၀တ်ရဘူးပြောတဲ့ ဘောင်းဘီတွေက ကမ္ဘာ့ပြိုင်ပွဲကြီးတွေမှာတောင် ၀တ်ခွင့်ပြုတာကွ။ လေယာဉ်ပျက်ကျပြီး ဆုံးသွားတဲ့ ကမ္ဘာကျော် ဂေါက်သီးချန်ပီယံကွာ၊ အမေရိကန်က ပိန်းစတီးဝပ် အဲသလို ဘောင်းဘီနဲ့ ခြေအိတ်ရှည်နဲ့ဝတ်ပြီး သူခိုးဦးထုပ်ဆောင်းတာကွ။ စည်းကမ်းကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှေးအကျဆုံးဂေါက်ကွင်း၊ စိန့်အင်ဒရူးမှာတောင် ခွင့်ပြုတာကွာ။ သူ့လက်ထက်ကျမှ သူ့ကိုယ်ပိုင်ဂေါက်ကွင်း ကျနေတာပဲ”
“ဂေါက်ကွင်းကဆိုင် (Pro Shop) မှာ ဘောင်းဘီရှည်ဝယ်ဝတ်ပြီး ရိုက်ရတာပေါ့ကွာ။ ဆိုင်ကလည်း ဖွင့်ပေလို့။ ကိုယ်နဲ့တော်တဲ့ ဘောင်းဘီကလည်း ရှိပေလို့ပေါ့ကွာ။ ဖြစ်သင့်တာက စည်းကမ်းအသစ် ထုတ်မယ်ဆိုရင်တောင်မှ နှစ်ပတ်တန်သည်၊ တစ်လတန်သည် ကြိုပြီးကြေညာရမှာပေါ့ကွာ။ သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်တွေမှာထည့်ပေါ့။ ဘာကုန်မှာမှတ်လို့ကွာ။ နောက်ပြီး စာရေးမတွေ ဘာလုပ်ဖို့ ခန့်ထားတာတုန်း။ လစဉ်ကြေးဘာညာ အချိန်မီမသွင်းရင် Tee-Off Booking ကြေး မရသေးရင်တောင် ဖုန်းဆက်ပြီး တောင်းတာကွာ။ ဖုန်းမဆက်ချင်ရင်တောင် မက်ဆေ့ခ်ျပို့လို့ ရပါတယ်။
“ဒီကွင်းကတော့ ဒါပဲပေါ့ကွာ။ ဟိုတစ်ကွင်း ရှိသေးတယ်မောင်။ ကြောင်ကြောင်ကျားကျား ဘောင်းဘီတွေဝတ်ပြီး ဂေါက်သီးရိုက်ခွင့် မပြုဘူးတဲ့ကွာ။ အမေရိကန်က ကမ္ဘာကျော် ဂေါက်သီးချန်ပီယံ ဂျွန်ဒဲလေးသာ မြန်မာပြည်လာရင် အဲဒီကွင်းမှာ ရိုက်ခွင့်ရမှာ မဟုတ်ဘူးမောင်”
“အဘရေ သားတို့ဖုန်းတွေ ပိတ်သွားပြီ လုပ်ပါဦး”
ဆီးဂိမ်းစ်မှာ ဆက်သွယ်ရေးအရာရှိအဖြစ် လုပ်အားပေးခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားလူငယ်လေး တစ်ယောက်က ပြောလာတယ်။ မျက်နှာလေးက မချိတင်ကဲနဲ့။
သူတို့လေးတွေမှာ အဆင်းရဲခံ၊ အပင်ပန်းခံပြီး နိုင်ငံ့ဂုဏ် မပျက်ရအောင် ကြိုးစားလုပ်အားပေးခဲ့ကြတာ။ LO တွေ၊ VO တွေ၊ WF တွေ ဖွင့်ပွဲပိတ်ပွဲတွေမှာ ပါဝင်ခဲ့ကြသူတွေ။ နိုင်ငံတော်က GSM Sim Card တွေပေးတော့ ပျော်လို့။ သူတို့မုန့်ဖိုးလေးတွေနဲ့ ဖုန်းတွေဝယ်။ ပိုက်ဆံတွေ ဖြည့်နဲ့ပေါ့။ သုံးလပဲ ခံမယ်ဆိုတော့ ဆီးဂိမ်းစ်ပွဲကျင်းပတဲ့ ဒီဇင်ဘာပြီးရင် ဇန်န၀ါရီ၊ ဖေဖော်ဝါရီ သုံးလတော့ သုံးလို့ရမယ်ပေါ့။ နောက်တစ်ခါ ဒီကတ်တွေ၊ နံပါတ်တွေကို တောက်လျှောက်သုံးခွင့်ပေးမယ် ပြောသံကြားတော့ ကလေးတွေပျော်ကြတယ်။ ၁၅၀၀ တန်ကတ် မဲနှိုက်တာက ပေါက်ချင်မှ ပေါက်မှာလေ။ သမ္မတကြီးကတောင် ဂုဏ်ပြုပွဲကြီး ခမ်းခမ်းနားနားလုပ်ပြီး ဂုဏ်ပြုပေးတော့ သူတို့ရထားတဲ့ Sim Card လေးတွေလည်း ဂုဏ်ပြုလက်ဆောင် ဖြစ်နိုင်ကောင်းရဲ့ပေါ့ဗျာ။
အခုလို ပိတ်သွားတော့ ကြွားထားသမျှလေးတွေ ရေဖြစ်သွားရုံသာမကဘူး။ ဖြည့်ထားတဲ့ လက်ကျန်ပိုက်ဆံတွေပါ ပလုံသွားတာကိုး။
“ကျုပ်က ၁၇၀၀၀ တောင် ကျန်သေးတာဗျ။ ကတ်ထုတ်ပေးတုန်းက မှတ်ပုံတင်နံပါတ်တွေ၊ နာမည်တွေနဲ့တွဲပြီး စာရင်းသွင်းတော့ ဟုတ်နိုးနိုး အောက်မေ့ခဲ့တာဗျာ”
အားကစားအဖွဲ့ချုပ် တစ်ခုက အမှုဆောင် တစ်ယောက်ရဲ့ ရင်ဖွင့်သံ။
ဘောင်းဘီတို မ၀တ်ရဘူးဆိုလို့ ဘောင်းဘီရှည်ဝယ်ဝတ်ပြီး ဂေါက်သီးရိုက်ခဲ့တဲ့ မိတ်ဆွေအတွက်တော့ ပြဿနာ သိပ်မရှိလှဘူးဆိုရင် ဆိုနိုင်ပါတယ်။ သူ့လိုမျိုး တွေ့ကြုံရမယ့် ဂေါက်သီးရိုက် အသင်းသား အရေအတွက်က များချင်မှများမှာကိုး။ စည်းကမ်းထုတ်ပြီးစမှာ ရှိသမျှ အသင်းသားတွေ လာရိုက်ကြမှာမှ မဟုတ်တာ။ လာရိုက်ပြီး မဟာစည်းကမ်းတော် အသစ်ကြီးအကြောင်း ကြားသိကြုံတွေ့ခဲ့ကြရတဲ့ အမျိုးကောင်းသား ဂေါက်သီးသမားကြီးများက သတင်းစကား တစ်ဆင့်ပါးကြမှာလေ။ ဒါပေမဲ့ အသင်းသားတွေလည်း အသင်းသား အခွင့်အရေး ရချင်ကြမှာ။ အရာသွင်းပြီး ကြိုကြိုတင်တင် အသိပေး အကြောင်းကြားတာမျိုးကို လိုလားကြမှာ။
ပြောရရင် ဘောင်းဘီတို မ၀တ်ရဆိုလို့ ဘောင်းဘီရှည် ၀ယ်ဝတ်ကြရတဲ့လူတွေ အရေအတွက်ကလည်း မများနိုင်ဘူး။ ဒီကိစ္စအတွက် ဂေါက်ကွင်းမှာ ၀င်ငွေတွေအများကြီး တိုးလာစရာ အကြောင်းမရှိဘူး။
ဆီးဂိမ်းစ်ဆင်း(မ်)ကတ် ကိစ္စကကျတော့ ဂေါက်ကွင်းကိစ္စနဲ့ မတူပါဘူး။ သုံးတဲ့လူ အရေအတွက် များတယ်။ သုံးလလောက် နိုင်ငံတော်ကို ပိုက်ဆံဝင်တယ်။ ဒီဖုန်းတွေကြောင့် လိုင်းကျပ်တယ် ပြောရအောင်ကလည်း ဆီးဂိမ်းစ်ကာလမှာ ပြည်ပကလာတဲ့ အားကစားသမားတွေ၊ အုပ်ချုပ်သူတွေ၊ နည်းပြတွေ၊ မီဒီယာတွေ၊ အဖွဲ့ဝင်တွေ အများကြီး သုံးခဲ့ကြတာ။ အဆင်လည်း ပြေခဲ့တာပါပဲ။ နိုင်ငံခြားက အဖွဲ့တွေပြန်တော့ လိုင်းတောင်ပိုချောင်သွားမယ်ထင်ရဲ့။
တကယ်လို့ တောက်လျှောက်ဆက်ဖွင့်ပေးထားဖို့ အစီအစဉ် မရှိဘူးဆိုရင်တောင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးမယ့်ရက်ကို တိတိကျကျ ကြိုတင်ပေးထားရင် ကိုယ့်ဘာသာချိန်ပြီး သုံးနိုင်တာပေါ့ဗျာ။ ဆက်ပြီးသုံးခွင့်ပေးရင်တော့ အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။ သုံးစွဲသူတွေလည်းပျော်၊ နိုင်ငံတော်လည်း ပိုက်ဆံရ။ အခုတော့ လက်ကျန်ငွေလေးတောင် လွှဲမရပြုမရနဲ့ ဆုံးသွားတဲ့ဘ၀။
ဂေါက်သီးရိုက်တဲ့ သူဋ္ဌေးတွေလည်း လူပါပဲ။ ဆီးဂိမ်းစ်မှာ လုပ်အားပေးခဲ့တဲ့ ကလေးတွေလည်း လူပါပဲ။ သန်း ၆၀ သော ပြည်သူတွေထဲက လူတွေပါ။ လူရာသွင်းပြီး သက်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်တွေမှာ လူကိုလူလို လေးလေးစားစားနဲ့ ဆက်ဆံဖို့လိုပါတယ်။ ကြိုတင်အသိပေးရမယ့် ကိစ္စတွေမှာ လုံလောက်တဲ့ အချိန်တစ်ခုပေးပြီး အသိပေးသင့်ပါတယ်။ သက်ကယ်ချောင်းနဲ့ ခေါင်းလောင်းထိုးပြီး ငါနှိုးသားပဲကွာ ဆိုတာမျိုးလည်း မဖြစ်သင့်ပါဘူး။
လူကိုလူလို လူပီသစွာ ဆက်ဆံနိုင်ကြပါစေ။ လူပီသစွာ ရှင်သန်ခွင့်ရကြပါစေ။
တယ်လီဖုန်း ဆက်သွယ်ရေးနှင့် အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှု နိမ့်ကျသော နိုင်ငံများတွင် ပါဝင်သည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရန်အတွက် ကမ္ဘာ့ဘဏ် အုပ်စုအဖွဲ့ဝင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ (IDA) က အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၁ ဒသမ ၅ သန်း ထုတ်ချေးမည် ဖြစ်ကြောင်း ကမ္ဘာ့ဘဏ်အုပ်စု အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့က သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်း ရှိသည့် ဈေးကွက်တစ်ခု ပေါ်ပေါက်ရန် လိုအပ်သည့် မူဝါဒများနှင့် စည်းကမ်း စည်းမျဉ်းများ ရေးဆွဲနိုင်ရေးအတွက် အကူအညီပေးခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ကမ္ဘာ့ဘဏ်က ဖေဖော်ဝါရီလ ၆ ရက်နေ့တွင် ကြေညာလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ တယ်လီဖုန်း ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် အခြေခံ လူတန်းစားများ ဆင်းရဲမွဲတေမှုမှ လွတ်မြောက်နိုင်မည့် အရေးကြီးသည့် စီမံကိန်း တစ်ခုဖြစ်ပြီး ယင်းကဏ္ဍတွင် ဈေးနှုန်း ကြီးမြင့်ခြင်း၊ ဝန်ဆောင်မှု အားနည်းခြင်းစသည့် အခက်အခဲများ ရှိနေကာ အဆိုပါ အခက်အခဲများကို အခြေခံ လူတန်းစားများနှင့် ဝေးလံခေါင်ဖျားသည့် ဒေသ များရှိ ပြည်သူများက ပိုမိုခံစားနေရကြောင်း ကမ္ဘာ့ဘဏ် အရှေ့တောင်အာရှ ဒေသဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားရေးမှူး Ulrich Zachau ကပြောကြားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး ကဏ္ဍများအတွက် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများက ချေးငွေများ ထုတ်ချေးသည်မှာ ကောင်းမွန်သော်လည်း အစိုးရအနေနှင့် ယင်းချေးငွေများကို အသုံးပြု၍ အကောင်အထည် ဖော်ရာတွင် ထိထိရောက်ရောက် ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း ပြည်တွင်း စီးပွားရေး ပညာရှင်များ ထောက်ပြကြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဧပြီလမှ စတင်ကာ ကျပ် ၁၅၀၀ တန် ဆင်းမ်ကတ်များကို အကန့်အသတ်ဖြင့် ရောင်းချခဲ့ပြီး ၂၀၁၃ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် တယ်လီဖုန်း ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေကို အတည်ပြုခဲ့သည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလနှောင်းပိုင်းက ကမ္ဘာ့ဘဏ် ဥက္ကဋ္ဌ ဂျင်ယုံကင်မ် မြန်မာနိုင်ငံကို လာရောက်စဉ် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကျန်းမာရေး၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးနှင့် စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၂၀၀၀ ပံ့ပိုးအသုံးပြုမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားထားသည်။
သိင်္ဂီထွန်း| စနေနေ့၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၈ရက်၊ ၂၀၁၄ခုနှစ်။
ရန်ကုန်၊ မဇ္ဈိမ။ ။ရန်ကုန်တိုင်း၊ ည်းကူးမြို့နယ်အတွင်းရှိ သမီးကလေးကျေးရွာကို သွားရောက်သတင်းယူသည့် သတင်းသမားများကို
လှည်းကူး-ပဲခူးလမ်းဆုံအနီးရှိ ရ.က.သ၂ တပ်၏ လုံခြုံရေးယူထားသော စစ်သားများက တားဆီးပြီး သတင်းသမားများတွင် ပါလာသည့် ကင်မရာများကို လုကာ ဓာတ်ပုံများ ဖျက်ပစ်ခဲ့သည်ဟု သမီးကလေးကျေးရွာကို သွားရောက် သတင်းယူသည့် ဓာတ်ပုံသတင်းထောက် ကိုအောင်မြင်ရဲဇော်က မဇ္ဈိမကိုပြောသည်။
"ကျွန်တော်တို့ကားတွေက နောက်မှာ လူကလည်းများတယ်ဗျာ။ ကင်မရာတွေလည်းပါတော့ တားတယ်။ အဲဒါနဲ့ ဘယ်သွားမလဲ မေးတော့ ကျွန်တော်တို့က ဒုက္ခသည်တွေနေတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းကို သွားမလို့လို့ ပြောတယ်။ အဲဒီ့လမ်းက ခါတိုင်းသာမာန် သွားလို့ရတယ်ဗျာ။ အဲဒါနဲ့ ဘယ်သူတားတာလဲမေးတော့ မင်းတို့ကို ဘယ်သူတားလဲ ပြောရမှာလား။ မင်းတို့က ဘာကောင်မို့လို့လဲနဲ့မေးတယ်။ အဲချိန်မှာ အထဲက ကင်မရာသမားတွေက ဓာတ်ပုံလှမ်းရိုက်ကြတယ်။ လှမ်းရိုက်တော့ လက်ထဲက ကင်မရာတွေကို လုပြီး ကတ်တွေဘာတွေဖျက်တယ်။ ပုံတွေဖျက်တယ်"ဟု သူက ရှင်းပြသည်။
ထိုအပြင် ရ.က.သ ၂ တပ်က လုံခြုံရေးတပ်က သတင်းသမားများ စီးနင်းလိုက်ပါလာသည့် ကားများကို စစ်တပ်တွင်းသို့ မောင်းရန် ပြောသဖြင့် ကားပေါ်တွင် ပါလာသော ဆရာဝန်များက ကြားဝင်ဖြေရှင်းသဖြင့် ဆက်လက် ရန်ရှာခြင်း မပြုလုပ်တော့သော်လည်း ကားများကို သမီးကလေးရွာသို့ သွားရောက်ခွင့်မပြုဘဲ လှည့်ပြန်ခဲ့ရသည်ဟု ပြောသည်။
လှည်းကူးမြို့နယ်အတွင်းရှိ သမီးကလေးရွာကို စစ်တပ်က ဘိုဒူဇာများ ထိုးကာ ရွာဖျက်ခံရသဖြင့် ကျေးရွာအနီး ကြီးလေးကြီးလမ်း မိုင်တိုင် အမှတ် ၃၀/၂ရှိ အောင်သိဒ္ဓိကျောင်းတိုက်တွင် ယာယီဒုက္ခသည်စခန်း ဖွင့်ထားသည်ကို သတင်းသွားရောက်ယူရန်နှင့် ဒုက္ခသည်များကို ဆေးဝါးများပေးရန် ဆရာဝန်အချို့နှင့် သတင်းသမားများက သွားရောက်ခြင်းကို ယခုကဲ့သို့ တားမြစ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု တားဆီးခံခဲ့ရသည့် သတင်းထောက်များက ပြောသည်။
ထိုသို့ အခက်အခဲများကြောင့် ရန်ကုန်တိုင်းသတင်းစာ၏ သတင်းထောက်တစ်ဦးက ရန်ကုန်တိုင်း လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဦးတင်ဝင်းကို ဆက်သွယ်ကာ အကူအညီတောင်းခဲ့သော်လည်း သတင်းထောက်များ အမှန်တကယ် ဟုတ်မဟုတ် မယုံကြည်သဖြင့် မကူညီနိုင်ကြောင်းသာ ပြောခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
"ကျွန်တော်တို့ကို စစ်တပ်က ရန်ရှာခံရတော့ ကျွန်တော်တို့က နယ်လုံဝန်ကြီးဆီ ဖုန်းဆက်ပြီး အကူအညီ လှမ်းတောင်းတာ။ အဲဒါ နယ်လုံဝန်ကြီးက သူ့ဆီကို မီဒီယာကနေ လှမ်းဆက်တယ်ဆိုတာကို အတည်မပြုနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာ။ လမ်းဘေးက လူတစ်ယောက်ကလည်း သူ့ဆီကို ဆက်လို့ရတယ်ပေါ့ဗျာ။ အဲလိုပြောတာဗျ"ဟု နာမည်ကြီး နေ့စဉ်သတင်းစာ တစ်စောင်၏ ဓာတ်ပုံသတင်းထောက်က မဇ္ဈိမကိုပြောသည်။
ထိုသတင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အတည်ပြုရန် လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဦးဝင်တင်းကို မဇ္ဈိမက ဆက်သွယ်သော်လည်း ဆက်သွယ်၍ မရရှိခဲ့ပေ။
သတင်းယူရန် သွားရောက်သည့်အထဲတွင် Sky Net၊ MNTV၊7Day၊ Eleven Media Group၊ စံတော်ချိန်၊ ရန်ကုန်တိုင်း၊ သမဂ္ဂ၊ မြန်မာပို့စ်အပါအဝင် မီဒီယာ ၁၀ခုကျော် ပါဝင်ပြီး ရှေ့ဆုံးကသွားပြီး လူအနည်းငယ်သာ ပါသည့် Eleven Media Group ၏ ကားတစ်စီးသာ ဒုက္ခသည်များရှိရာ ဘုန်းကြီးကျောင်းသို့ သွားရောက်ခဲ့ရသည်။
မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ကမ္ဘာအေး ဘုရားလမ်းပေါ် ဂန္ဓမာလမ်းထောင့်ရှိ မီးပွိုင့်တွင် ဖေဖော်ဝါရီလ ၆ ရက် ညနေ ၅ နာရီခန့်က မီးပွိုင့် မီးနီ ပြထားသောကြောင့် ယာဉ်များ ရပ်ထားစဉ် ယာဉ်တိုက်မှု ဖြစ်ခဲ့ရာ မှတ်တမ်းတင် ဓာတ်ပုံရိုက်သည့် အတိုက်ခံရသူကို ယာဉ်နှစ်စီးတိုက်မှု ကျူးလွန်ခဲ့သူ ယာဉ်မောင်း အမျိုးသားက ဓားဖြင့် လိုက်ခုတ်ခဲ့ကြောင်း မရမ်းကုန်း မြို့မ ရဲစခန်းမှ ရဲအရာရှိတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ချော်တွင်းကုန်းဘက်မှ ရှစ်မိုင် မီးပွိုင့်ဘက်သို့ Total ရေနံကုမ္ပဏီမှ အသက် ၄၁ နှစ်အရွယ်ရှိ ဦးအောင်သီဟ မောင်းလာသော KIA SORENTO SUV အမျိုးအစားယာဉ်သည် အဆိုပါ ဂန္ဓမာလမ်းထောင့် မီးပွိုင့်အရောက် မီးနီမိ၍ ရပ်ထားစဉ် ၎င်းယာဉ်နောက်မှ MAZDA RX-8 အမျိုးအစားယာဉ်က ဝင်တိုက်မိသောကြောင့် ယာဉ်တိုက်မိသည့် နေရာကို ဦးအောင်သီဟက ဖုန်းဖြင့် မှတ်တမ်းတင် ဓာတ်ပုံ ရိုက်ယူနေစဉ် အဆိုပါ MAZDA RX-8 ယာဉ်မှ ယာဉ်မောင်း အမျိုးသားက အရှည် တစ်ပေခန့်ရှိ မြက်ခုတ်ဓားဖြင့် ဦးအောင်သီဟကို လိုက်ခုတ်သောကြောင့် ထွက်ပြေးခဲ့ရကြောင်း မရမ်းကုန်း မြို့မ ရဲစခန်းထံမှ သိရှိရသည်။
“ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ စကားများရာက ဖြစ်ကြတာ။ ရန်ကုန်မြို့မှာ အသေးအမွှား ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်တာက လူတိုင်းအတွက် နေ့စဉ် ကြုံတွေ့နေရတာဆိုတော့ အချင်းချင်း ပြေလည်အောင် ညှိနှိုင်းပြောကြရင် ဒီလိုမျိုး ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ လတ်တလော ဓားနဲ့လိုက်ခုတ်တဲ့သူက အင်းစိန်၊ ဖော့ကန် ရပ်ကွက်မှာ နေတယ်လို့ စုံစမ်း သိရှိထားတယ်” ဟု မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ယာဉ်ထိန်းတပ်ဖွဲ့စုမှ ရဲအရာရှိတစ်ဦးက ဆိုသည်။
အဆိုပါ ယာဉ်တိုက်ရာမှ ဓားဖြင့် လိုက်ခုတ်သည်ဟု တိုင်ကြားခံရသူကို မရမ်းကုန်း မြို့မရဲစခန်းမှ (ပ)၃၇/ ၁၄၊ ပုဒ်မ ၃၀၇ ဖြင့် အမှုဖွင့်ပြီး စုံစမ်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ သိရှိရသည်။
ရန်ကုန်မြို့အတွင်း ယာဉ်ကြောကျပ်သော နေရာများရှိ မီးပွိုင့်အချို့တွင် မီးစိမ်းမှ မီးနီပြောင်းစဉ် မီးဝါ အချက်ပြမှုများ မရှိခြင်း၊ မီးပွိုင့်အချို့မှာ ပျက်နေခြင်းများကြောင့် ယာဉ်များ အရှိန်လွန်ပြီး တစ်စီးနှင့်တစ်စီး ယာဉ်တိုက်မှုများ နေ့စဉ် ဖြစ်ပွားနေသည်ကို ကြုံတွေ့နေရကြောင်း မြို့တွင်း အငှားယာဉ်မောင်းများထံမှ သိရသည်။
ခွင့်မပြုပဲဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့သော သူရိယနေဝန်းပြင်ပသတင်းထောက်ကိုသစ်ငြိမ်းအား တရားစွဲရခြင်းကိုရှင်းလင်း
သူရိယနေဝန်းပြင်ပသတင်းထောက် ကိုသစ်ငြိမ်း(ခ) ကိုနိုင်ဦးသည် ဦးအေးလွင်နှင့် တရားရင်ဆိုင်နေရသော ဒေါ်အိအိသင်းအား တရားရုံးမှ ထွက်လာရာတွင် ခွင့်ပြုချက်မယူပဲ ဓာတ်ပုံရိုက်ယူမှုနဲ့ ပတ်သက်၍ ကာယအိနြေ္ဒပျက်ပြားမှုဖြင့် တရားစွဲဆိုခဲ့ရခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ MJN ရုံးတွင် ဖေဖော်ဝါရီ ၈ရက်က ရှင်းလင်းခဲ့သည်။
ဒေါ်အိအိသင်းက “ကျွန်မတရားရုံးကထွက်လာတဲ့ အခါမှာ ကျွန်မကားကို ဓာတ်ပုံရိုက်တာတွေ့လို့ ကျွန်မ မေး လိုက်တယ် သူက နင့်ကားကိုတင် မဟုတ်ဘူး နင့်ကိုပါအချိန်မရွေး ရိုက်လို့ရတယ် ငါရိုက်တာ ဘာဖြစ်လဲလို့ ပြောတယ် ကျွန်မကို သတင်းယူဖို့ လာတာဆိုရင် ကျွန်မကို အရင်မေးပြီးတော့ ရိုက်လို့ရပါတယ် သူဒါမျိုးလုပ်တော့ ကျွန်မကပဲ ကားသူခိုးလိုလို ဖြစ်သွားတယ် ပြီးတော့ ကာယအိနြေ္ဒလည်းပျက်တယ် ဒါကြောင့် ကျွန်မလည်း တရားစွဲဖို့ လုပ်လိုက်ပါတယ်”ဟု ပြောသည်။
ယင်းကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ တာဝန်ရှိသူများက တရားလိုဖြစ်သူ မအိအိသင်းကို လာရောက်တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပါက ကြေးအေးပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ (၇)ရက်ထုတ် ဟစ်တိုင်ဂျာနယ် Vo.1 No.12 တွင် “သူရိယနေဝန်းဂျာနယ်ပြင်ပ သတင်းထောက် ကဗျာဆရာ၊ ဇာတ်ညွန်းဆရာ ကိုသစ်ငြိမ်း၊ မှော်ဘီမြို့နယ်က တရားရုံးတွင် တရားစွဲဆိုခံရ” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ပါဝင်သော သတင်း၌ ကိုသစ်ငြိမ်းက ရှင်းပြထားရာတွင် “စိတ်ဝင်စားစရာ သတင်းတစ်ပုဒ်၊ အများပြည်သူကို တင်ပြဖို့သင့်သော သတင်းတစ်ပုဒ် ဖြစ်သောကြောင့် တရားစွဲဆိုခံရသူ ကိုအေးလွင်နှင့် ဇနီးတို့ကို ဓာတ်ပုံရိုက်ယူကာ နောက်ထပ် တရားလိုဖြစ်သော မအိ(ခ)ဒေါ်အိအိသင်းကိုတော့ မမြင်ဘူးသောကြောင့် ၎င်းစီးလာသော ကားကိုဓာတ်ပုံရိုက်ယူခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း အဲဒီလို့ရိုက်ယူမူကို မအိ(ခ)ဒေါ်အိအိသင်းက မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်းဆဲဆိုကာ ဘာသတင်းထောက်လဲ ဆဲဆိုလျှက် ဂုဏ်သရေ ထိခိုက်အောင်ပြောပြီး ရဲစခန်းတိုင်မယ်ဆိုကာ ကားစက်နှိုးတယ် အဲ့ဒီအချိန်မှာ ကားကိုဓာတ်ပုံထပ်ရိုက်ခဲ့ပါတယ်”ဟု ပြောထားသည်။
ယင်းကဲ့သို့ ပြောဆိုရှင်းလင်းထားသည်မှာလည်း မဟုတ်မှန်ကြောင်းငြင်းဆိုထားပြီး ယင်းသတင်းအား ထုတ်ဝေခဲ့သော ဂျာနယ်တိုက်အနေဖြင့် ပြန်လည်တောင်းပန် ပြင်ဆင်ချက်ထည့်ပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့ပြီး တောင်းပန်မှုများ မလုပ်ဆောင်ပါကာ တရားဥပဒေအရ ဖြေရှင်းမည်ဟုလည်း ဆိုထားသေးသည်။
ရှမ်းပြည် ဖွံ့ဖြိုးရေး အရေးတကြီးလိုအပ်နေ
လက်နက်ကိုင် ဒေသတွေက ရှမ်းအမျိုးသားနေ့
ခေတ်အဆက်ဆက် ဖွံ့ဖြိုးမှု နှေးကွေးတဲ့ တောင်ပေါ် ဒေသ ရှမ်းပြည်နယ် ဟာ မြန်မာ နိုင်ငံရဲ့ ၄ ပုံ ၁ ပုံ ကျယ်ဝန်းတဲ့ အကြီးဆုံး ပြည်နယ် ဖြစ်ပါတယ်။
မတည်ငြိမ်မှုတွေနဲ့ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲမှု တွေကြောင့် ရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးဟာ အိမ်နီးချင်း တရုတ် နိုင်ငံ၊ ထိုင်းနိုင်ငံ မြန်မာ ပြည်မ ဒေသတွေနဲ့ နှိုင်းစာရင် အများကြီး နောက်ကျ နေပါပြီ။
ရှမ်းပြည်နယ် လူမျိုးစု ဒေသ တွေမှာ ကလေးငယ်တွေ ကြုံလှီ သေးကွေး တဲ့ အာဟာရ လိုအပ်မှု၊ ပညာရေး မှာလည်း ဒေသ ဘာသာ စကား သင်ကြားမှု အားနည်းလို့ ကျောင်းစောစော ထွက်တဲ့ ရာခိုင်နှုန်း များနေတယ် လို့ သမ္မတရဲ့ စီးပွားရေး လူမှုရေး အကြံပေး အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်တဲ့ တောင်ကြီး ဇာတိ ဒေါက်တာ ယဉ်ယဉ်နွယ်က သုံးသပ် ပြောဆို ပါတယ်။
ရှမ်းပြည် ဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် ပြည်နယ် အစိုးရမှာ လုပ်ပိုင်ခွင့် အာဏာတွေ ရှိရမယ်၊ လက်ရှိ မှာတော့ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှု တွေ အပါအဝင် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး ကိစ္စ တွေမှာ ပြည်နယ်တွေကို ဖွဲ့စည်းပုံက အာဏာ ခွဲပေး မထားဘူး လို့ ရှမ်းအမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် အတွင်းရေးမှူး စိုင်းညွန့်လွင်က ထောက်ပြ ပါတယ်။
ရှမ်းပြည်နဲ့ အဓိက ထိစပ်နေတဲ့ တရုတ်ပြည်ရဲ့ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးမှု တဟုန်ထိုး တိုးတက် နေတာ ကလည်း နောင်မှာ ကြုံရမယ့် ပြဿနာ တခု ဖြစ်တယ်လို့ စိုင်းညွန့်လွင် က ဆိုပါတယ်။
နယ်စပ် ပြဿနာတွေ ထဲမှာ လူကုန်ကူး တာနဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါး ပြဿနာတွေလည်း အဓိက ပါဝင်နေတယ်လို့ ဒေါက်တာ ယဉ်ယဉ်နွယ်က ဆိုပါတယ်။ တရုတ်ပြည် နယ်စပ်က ရှမ်း ကချင် တိုင်းရင်းသား တွေမှာ ပညာပေးမှု အားနည်း လို့ မူးယစ်ဆေး နဲ့ ဆက်နွယ် နေတဲ့ ရောဂါတွေ ကူးစက် ပျံ့နှံ့နှုန်း များနေ တာကို တွေ့ခဲ့ရတယ် လို့လည်း သူက ဆိုပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ရှမ်းပြည်နယ် ဖွံ့ဖြိုးရေးမှာ မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပြည်ထောင်စု ပြင်ဆင်ရေး တွေ အတွက် အရင်ကထက် မျှော်မှန်းချက် တွေ များလာပြီလို့ စိုင်းညွန့်လွင် က ပြောပါတယ်။ လက်ရှိ အစိုးရ က အပစ် ရပ်စဲရေး အတွက် အရင် အစိုးရ တွေထက် လျှော့ပေါ့ ပေးတာ တွေ့ရပြီး ဖက်ဒရယ် စကားတွေ လည်း ပြောလာ ကြပြီ လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
တောင်တန်း ပြည်မ ပူးပေါင်း လွတ်လပ်ရေး ယူဖို့ ရှမ်းစော်ဘွား တွေ ပင်လုံမှာ စတင် သဘောတူ ခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၇ ရက်နေ့ကို မူလက ရှမ်းအမျိုးသားနေ့ အဖြစ် သတ်မှတ် ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၆၂ စစ်အာဏာသိမ်းပြီး နောက်ပိုင်း ရှမ်းပြည်နယ် နေ့လို့ ပြောင်းလဲ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ဒီနေ့ ကို မြန်မာ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ဒီနှစ်မှာ ထူးထူးခြားခြား သဝဏ်လွှာ ပို့ခဲ့သလို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လည်း တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
မယ်လက်တိုနင် (melatonin) သည် ဦးနှောက်တွင်းရှိ pineal glandမှ ထုတ်လုပ်သော ဟော်မုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ မယ်လက်တိုနင်သည် အိပ်ခြင်းနှင့်နိုးခြင်းစက်ဝန်းကို ထိန်းချုပ်ပေးသည်။ အသား၊ အစေ့ အဆန်များ၊ သစ်သီး၊ ဟင်းရွက်များတွင်လည်း မယ်လက်တိုနင် မဆိုစ လောက်ပါတတ်သည်။
ညနေခင်းအချိန်မှစ၍ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း မယ်လက်တိုနင်ပမာဏ တဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာပြီး ညအချိန်တွင် အမြင့်ဆုံးရောက်လာသည်။ ထို့နောက် နံနက်စောစော အချိန်မှစ၍ ဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ကျသည်။ အလင်းရောင်ရရှိမှုကလည်း မယ်လက်တိုနင် ထုတ်လုပ်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသည်။ နေ့တာတို သည့် ဆောင်းရာသီအချိန်များတွင် မယ်လက်တိုနင် စောစောထွက်ပြီး လေးလံထိုင်းမှိုင်းစေသည့်အတွက် ဆောင်း တွင်းစိတ်ကျဝေဒနာဟူ၍ပင် ခေါ်ဆိုကြသည်။
သဘာဝအတိုင်းထွက်ရှိသည့် မယ်လက်တိုနင်ပမာဏသည် အသက် ကြီးလာသည်နှင့် တဖြည်းဖြည်းနည်းပါးလာသည်။ အချို့ သက်ကြီးရွယ်အိုများ၌ မယ်လက်တိုနင် လုံးဝမထွက်တော့သည်ကို တွေ့ရသည်။ လေယာဉ်ခရီးပျံသန်းရခြင်းကြောင့် နေ့နှင့်ညလွဲခြင်း၊ အိပ်မပျော်ခြင်း စသည့် ဝေဒနာများအတွက် မယ်လက်တိုနင်ပါဝင်သော ဆေးပြားများ ပေးသွင်းကုသနိုင်သည်။ ညဆိုင်း အလုပ်လုပ်ရသူများ၊ ခွဲစိတ်ကုသမှု ခံယူပြီး နောက်အိပ်မပျော်ဘဲ စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း၊ နာတာရှည်ခေါင်းကိုက် ခြင်းတို့ကိုလည်း မယ်လက်တိုနင် ဆေးပြားဖြင့် သက်သာစေနိုင်သည်။ မျက်စိမမြင်ရသူများတွင် အလင်းရောင်ကို မြင်နိုင်စွမ်းမရှိသောကြောင့် မယ်လက်တိုနင် အချိန်မှန်မှန်မထွက်ဘဲ နေ့ခင်းဘက်အိပ်၍ ညဘက်နိုးနေတတ်သည့် ပြဿနာကိုလည်း မယ် လက်တိုနင်ဆေးပြားဖြင့် ကုသပေး နိုင်သည်။
ကလေးငယ်များ၊ ကိုယ်ဝန် ဆောင်မိခင်များ၊ နို့တိုက်မိခင်များ အ နေနှင့် မယ်လက်တိုနင်ဆေးပြားကို ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပြီးမှသာ သောက် သုံးသင့်သည်။ မယ်လက်တိုနင် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာ အိပ်ငိုက် ခြင်း၊ ကိုယ်အပူချိန်ကျခြင်း၊ အိပ်မက်မက်ခြင်း၊ နံနက်ချိန်တွင် အိပ်ရာထရန် ခက်ခြင်းတို့ဖြစ်ကြသည်။
မယ်လက်တိုနင် သောက်သုံး ခြင်းကြောင့် အိပ်ငိုက်တတ်ပါက ကားမောင်းစရာရှိလျှင်၊ မမောင်းသင့်ပါ။စက်ပစ္စည်း ကိုင်တွယ်စရာရှိလျှင် မသုံးစွဲသင့်ပါ။
by Health Updates Journal / 1d // keep unread // hide //
အလေးမလေ့ကျင့်ခန်းက အခြားလေ့ကျင့်ခန်းများထက် အမျိုးအစား (၂) ဆီးချိုအား ပိုမိုကာကွယ်နိုင်
Harvard University မှ လုပ်ဆောင်ခဲ့သော လေ့လာမှုတစ်ခုအရ ပုံမှန်အလေးမလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လေ့ရှိသူ အမျိုးသမီးများက မလုပ်သည့်အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးအစား(၂) ဆီးချိုဖြစ်နိုင်ချေ လျော့နည်းကြောင်း သိရသည်။ယင်းလေ့လာမှုတွင် အမျိုးသမီးပေါင်းများစွာအား ၈နှစ်ကြာ
လေ့လာခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ယင်းလေ့လာမှုတွင် ဆရာဝန်များက အလေးမခြင်းနှင့် အလေးမခြင်းကဲ့သို့ ကြွက်သားများအား ၀န်ပေးသည့်လေ့ကျင့်ခန်းများ
လုပ်သည့်အမျိုးသမီးများက အမျိုးအစား(၂) ဆီးချိုအဖြစ်နည်းကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ရလဒ်များအရ တစ်ပတ်လျှင် မိနစ် ၁၅၀ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သူခြင်းတူလျှင် အလေးမလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သည်သူများက အမျိုးအစား (၂) ဆီးချိုရောဂါဖြစ်နိုင်ချေ သုံးပုံတစ်ပုံ ပိုနည်းကြောင်းတွေ့ရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ ရှိနေဆဲ
အကျဉ်းသားမိသားစုများ စောင့်ဆိုင်းနေကြဆဲ။ (ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၃)
သမ္မတဦးသိန်းစိန်က ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် ကတိပေးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၃ ခု နှစ်ကုန်မှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးကို လွှတ်ပေး မယ်ဆိုတဲ့ ရက်ကနေ သီတင်းငါးပတ်ကြာတဲ့ထိ ဒါဇင်ပေါင်းများစွာ အကျဉ်းထောင်တွေ ထဲမှာ ရှိနေသေးပြီး နောက်ထပ် အများအပြားလည်း အဖမ်းခံနေရတုန်းပဲလို့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအရေး လှုပ်ရှားသူတွေက ဗွီအိုအေကိုပြောပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့မှာ သမ္မတက ပြစ်ဒဏ် လွတ်ငြိမ်းခွင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၃၃ ဦး ကျန်နေသေး တယ်လို့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP က ပြောတာပါ။
အဲဒီကြေညာချက်ထုတ်ပြီးနောက်ပိုင်း မှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိစ္စရပ် ပြီးပြတ်သွားပြီလို့ အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေက ပြောကြပါတယ်။
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားကိစ္စရပ် ပြီးပြတ်သွားပြီလို့ အစိုးရဘက်က ဘယ်လိုပြောဆိုချက်မျိုးမဆို ရိုးသားမှုမရှိတာဖြစ်တယ်လို့ AAPP တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး ကိုဘိုကြည်က သောကြာနေ့မှာ ဗွီအိုအေကိုပြောပါတယ်။
ဒီနှစ်ဆန်းပိုင်းကတည်းကဆိုရင် လူ ၁၀ ယောက်ထက် မနည်းကို နိုင်ငံရေးဆက်စပ်တဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ AAPP က ပြောပါတယ်။ ထပ်ပြီး အဖမ်းခံရတဲ့ လူအများအပြား ဟာ နောက်ဆုံး ပြစ်ဒဏ် လွတ်ငြိမ်းခွင့်ပေးလိုက်တဲ့ အလားတူ ပုဒ်မ တွေနဲ့ပဲ ဖမ်းဆီးခံထားရတာဖြစ်တယ်လို့ AAPP က ပြောပါတယ်။
လူပေါင်း၁၄၈ ယောက်ထက် မနည်းဟာ ပြစ်ဒဏ် ချမှတ် ခံရဖို့ စောင့်ဆိုင်းနေကြရတယ်လို့ AAPP က ပြောပါတယ်။
Steve Wozniak တွေးတဲ့ Apple သည့် Android စမတ်ဖုန်းထုတ်သင့်သည့်ဆိုသော
Article By Aung Heine .
ကွန်ပျူတာ အင်ဂျင်နီယာ၊ ပရိုဂရမ်မာ တစ်ဦးဖြစ်သူ၊ Apple ကုမ္ပဏီရဲ့ Co-founder တစ်ဦးလည်းဖြစ်သူ Steve Wozniak ဟာ
Apple ကုမ္ပဏီဟာ Google ရဲ့ Android operating စနစ်သုံးဖုန်းတွေကို ထုတ်သင့်တယ်လို့ယုံကြည်ပြီး ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
သူအဆိုအရ ဖုန်းဈေးကွက်ရဲ့ ဒုတိယတစ်ခု အနေနဲ့ Android ဖုန်းဈေးကွက်ကိုထိန်းထားဖို့ဆိုတာ ဘာမှမဟုတ်တဲ့ လွယ်လွယ်လေးသာ ဖြစ်ပြီး
ကျတော်တို့ဟာ တစ်ချိန်တည်းမှာ ယင်းဧရိယာနှစ်ခုကို ကောင်းကောင်း လုပ်ဆောင်နိင်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Wired.comရဲ့ စီနီယာစာရေးဆရာတစ်ဦးဖြစ်သူ Mat Honanရဲ့အဆိုအရ ဒါဟာနည်းပညာပိုင်းအနေနဲ့ဖြစ်နိင်မှာ မဟုတ်ပါဘူးလို့ဆိုခဲ့ပြီး
ဒီနေ့တွေမှာ Appleနဲ့အတူ ရင်းနှီးနေတဲ့သူသာ ယင်းတကယ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အခွင့်အရေး အရာတွေကို သေချာစွာသိရှိနိင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။
" ကျတော်တို့ (Apple ) ဟာ ကောင်းစွာယှဉ်ပြိုင်နိင်နေပါတယ်။ ပြည်သူတွေဟာ ပြီးခဲ့သော ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ စတိုင်တွေနဲ့ ကျတော့တို့ ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့
ထုတ်ကုန်တွေမှာ ကြိုက်နှစ်သက်လျက်ရှိပါတယ်။ ဒါဟာ အခြား Android ပေးစွမ်းနိင်းခြင်းတွေကို ယှဉ်ပြိုင်နိင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ "
အထက်ပါ Woz ရဲ့ ပြောဆိုချက်တွေဟာလည်း Apple အပေါ်မှာ သူရဲ့ထားရှိတဲ့ အတွေးအမြင်တွေအကြောင်းကို ပွင့်လင်းစွာ ပြောကြားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို tech industry တွေအပေါ် သူရဲ့အမြင်တွေဟာလည်း အမြဲကိုနားထောင်ချင်အောင် စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းနေသည့်တိုင်ဖြစ်ပါတယ်။
Windows 32 bits နှင့် 64 bit ကွာခြားချက် အကြမ်းဖျင်း ရှင်းလင်းချက်
ဒါက ဘာကြောင့်လဲဆို ကွန်ပြူတာရဲ့  RAM အသုံးချမှုက အဓိကပါတဲ့။ 32 bits က RAM 4GB ထက်ပိုမသုံးဘူး။ 64 bits က RAM ရှိရင်ရှိသလောက် သူသုံးဖြစ်လိမ့်မယ်။ Random Access Memory ကိုပြောတပါ။ တစ်ပြိုင်နက်တည်း အလုပ်လုပ်နိုင်မှုပါ။ အလွယ်ဆုံး ဥပမာ ပေးရရင် ဓာတ်ခဲ ၂ လုံးအား အသုံးပြုပြီး ထွန်းတဲ့ ဓာတ်မီးနဲ့ ဓာတ်ခဲ ၃ လုံးအား တစ်ပြိုင်နက်တည်း ထွန်းတဲ့ ဓာတ်မီးတို့ အားကွာသလိုပေါ့။ ၃လုံးအားက ပိုလင်းလိမ့်မယ်။
ဒီတော့ Microsoft က တရားဝင် ရေးသားထားတဲ့ 32 bits နဲ့ 64 bits ကွာခြားချက် အကြောင်းများကို အောက်ပါလခ့်မှာ ဝင်ရောက် ဖတ်ရှု ကြည့်နိုင် ပါတယ်။
မီးပ္ပိုင့် ပိတ်ဆို့မူတွေကို ထောက်လှမ်းပေးမဲ့ Concept ကား
စမ်းသပ်နေပြီး ထွက်ရှိခြင်းရှိ/မရှိ ထိုကဲ့သို့သော အခြေအနေမှာ ရှိတဲ့ကားကို concept ကားလို့ခေါ်ပါတယ်။
အဆိုပါကားမှာတော့ သင့်ကားမောင်းနေရင် မီးပ္ပိုင့်ရဲ့ အခြေအနေ ပိန်ဆိုခြင်း၊ရှိမရှိစတဲ့ သတင်းတွေကို သိရှိစေတဲ့ အိုင်ဒီယာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
Renault ကားလိုမျိုးမှာ (၂၀)ရာစု အစပိုင်းရဲ့ပြောင်းလဲမူတွေ အဖြစ် တွေ့မြင်ကြရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထို့ကဲ့ကို့သော်ကားတွေကို သင့်မောင်းနှင်ရင်တော့ မီးပ္ပိုင့်ထိပ်မှာ ပိတ်နေမှာမျိုးကို မပူရတော့ပါဘူး။
သူမှာ quadrocopter လိုခေါ်တဲ့ ကားရဲ့အမိုးပေါ်ကနေ ထိန်းချုပ်မူ App ကိုသုံးကာ သင့်ရဲ့ Tablet ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ဌင်းပေါ်မှာပါတဲ့ ကင်မရာနဲ့ လမ်းတစ်လျှောက်
ထိန်းချုပ်န်ိင်မူတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ အတားအဆီးအနှောင့်အယှက်တွေကို လွယ်လွယ်ကူကူကျော်ဖြတ်နိင်ပါလိမ့်မယ်။
ပိုင်းလေ့ာတစ်ယောက်လို ထိန်းချုပ်နိင်ပြီး တစ်ကြိမ်တည်းနဲ့ မြင်ကွင်းနှစ်ခုကို ကြည့်ရူနိင်တဲ့မြင်ကွင်းတွေပါဝင်ပါတယ်.
ဒါကြောင့် ထို့ကဲ့သို့သော် နည်းပညာတွေကို သုံးစွဲနိင်ခဲ့ပါမူ အနာဂတ်နည်းပညာကားတွေမှာလည်း ပိုမိုဆန်းသစ်စွာ တွေ့မြင်နိင်ရလာတော့မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ရန် ရခိုင်မှစီမံကိန်းနေရာ (၁၀) ခုတွင် စမ်းသပ်လေ့လာမူ ပြုလုပ်
(နိရဉ္စရာ- ၈ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၀၁၄)
လေစွမ်းအင်ကို အသုံးပြုပြီး လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ထုတ်လုပ်နိုင်ခြေ ရှိ မရှိ လေ့လာ စူးစမ်းမူ လုပ်ငန်း တခုကို ရခိုင်ပြည်နယ်မှ အလားအလာရှိသော စီမံကိန်း နေရာ (၁၀) ခုတွင် ပြုလုပ်နေသည်ဟု သတင်း ရရှိသည်။
ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၇ ရက်နေ့က ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် မာန်အောင်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးအောင်စိန်က လေအားလျှပ်စစ် တပ်ဆင်ရေးအဖွဲ့ အမှန်တကယ် လာရောက်ရန် ရှိ/မရှိနှင့် ရောက်ရှိလာပါက ရခိုင်ပြည်နယ်အား ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိကို မေးမြန်းရာ အဆိုပါမေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးအောင်သန်းဦးက ဖြေကြားစဉ် ရခိုင်ပြည်နယ်မှ စီမံကိန်း နေရာ (၁၀) ခုတွင် လေ့လာစမ်းသပ်မူ ပြုလုပ်ကြောင်း ဖြေကြားသွားခဲ့သည်။
၎င်းစမ်းသပ်မူကို China Three Gorges Corporation က ပြုလုပ်နေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာ အစိုးရသည် ၎င်းတရုတ်ကုမ္ပဏီနှင့် ၂၀၁၂ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ကတည်းကပင် နားလည်မှု စာချွန်လွှာ (MoU) အား လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး ယင်းနားလည်မှုစာချွန်လွှာအရ အကြို စူးစမ်း တိုင်းတာမှုများကို ပြုလုပ်နေခြင်း ဖြစ်သည်။
ထိုသို့ လေ့လာစူးစမ်းမူ ပြုလုပ်ရာတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်သာမက ချင်းပြည်နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့ ပါဝင်သည်ဟု သိရသည်။
တိုင်းတာရရှိသော လေတိုက်နှုန်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်မြေနေရာ အနေအထားအရ စီမံကိန်းများ လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် ပုံစံဒီဇိုင်း၊ တစ်နှစ်ရရှိနိုင်သော လေစွမ်းအင် ပမာဏ၊ စီးပွားရေးတွက်ခြေကိုက်မှု၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု လေ့လာချက်များ အားလုံး တွက်ချက်ပြီး အစီရင်ခံစာ တင်မည်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
အစီရင်ခံစာအရ စီမံကိန်းဖြစ်မြောက်နိုင်စွမ်းရှိသော နေရာများတွင် စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်းဖြင့် ၀န်ကြီးမှ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၇ ရက်နေ့တွင်ပြုလုပ်သော ပြည်သူ့ လွှတ်တော်တွင် ရှင်းလင်းပြောကြားသွားခဲ့သည်။
ခွင့်ပြုချက်ရနိုင်ငံခြားအော်ပရေတာအသစ်များကြောင့် လက်ရှိအင်တာနက်ဆိုင်များ ပိတ်သိမ်းဦးမည် မဟုတ်ဟုဆို
မကြာမီကခွင့်ပြုချက်ရရှိခဲ့သည့် နိုင်ငံခြားမိုဘိုင်း အော်ပရေတာအသစ် များကြောင့် ဝင်ငွေကျဆင်းသွားမည် ဖြစ်သော်လည်း အင်တာနက်ဆိုင် ပိတ် သိမ်းသွားမည်မဟုတ်။ ဆက်လက်ရပ်တည်သွားမည်ဟု အင်တာနက်ဆိုင်များ ဖွင့်လှစ်သည့်အသိုင်းအဝိုင်းမှ သိရသည်။
”လာသုံးမယ့်သူနည်းသွားမယ် ဆိုတာကတော့ လက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သုံးချင်တဲ့သူကတော့ ပုံမှန်အတိုင်း လာသုံးကြမှာပါ။ အခုလည်း မိုဘိုင်း ခေတ် ဖြစ်နေတာပဲ။ သိပ်ပြီးတော့ စိုး ရိမ်စရာတော့ မရှိပါဘူး” ဟု ကျောက် တံတားမြို့နယ်မှ အင်တာနက်ဆိုင်ပိုင် ရှင်တစ်ဦးက ပြောသည်။
မိုဘိုင်းအင်တာနက် မြန်နှုန်းများလက်ရှိထက် ပိုမိုကောင်းမွန်မြန်ဆန် လာ၍ မိုဘိုင်းအင်တာနက်ကို ပိုမိုသုံး ကြမည်ကို လက်ခံသော်လည်း ကွန်ပျူ တာဖြင့် သုံးသည့် user မှာ မည်သည့် အချိန်မှ ပျောက်ကွယ်မသွားနိုင်ပါဟု ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်မှ Jokerအင်တာ နက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်တစ်ဦးက ပြောသည်။
၂၄ နာရီလုံး မိုဘိုင်းအပေါ်မှာပဲ အင်တာနက် ဘယ်သူမှ မသုံးကြဘူး။ ဘက်ထရီ ကုန်သွားမယ်။ မိုဘိုင်းဖုန်း တွေ အင်တာနက် မြန်သလို၊ ကျွန်တော်တို့ဆိုင်တွေလည်း မြန်နှုန်း ကောင်းလာမှာပါ။ ဒါကြောင့် ပိတ်ဖို့က တော့ မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူး” ဟု ၄င်းက ပြောသည်။
သုံးစွဲသူ နည်းပါးသွား၍ အင်တာ နက်သုံးစွဲခနှုန်းများ လျှော့ချ၍ ဆိုင် ဆက်လက်ရပ်တည်ခြင်းမျိုး မဟုတ်ဘဲ ပုံမှန်နှုန်းထားအတိုင်းသာ ဆက်ဖွင့်သွား မည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံခြားဖုန်းခေါ်ဆို ခြင်း၊ ဂိမ်းကစားခြင်းနှင့် email ပို့ခြင်း စသည့် အချက်များကြောင့်ဆိုင်ပိတ် မည်မဟုတ်ဟု လသာမြို့နယ်မှ အင်တာ နက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်တစ်ဦး က ပြောသည်။
လက်ရှိတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အင် တာနက်သုံးစွဲမှု၌ မိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့် အင် တာနက်သုံးစွဲသည့် လူဦးရေမှာ ကွန်ပျူ တာဖြင့် သုံးစွဲသည်ထက် ပိုမိုများပြား လျက်ရှိနေပြီး မြန်နှု န်းမှာ အင်တာနက်သုံးနိုင်သည့် စနစ်များထဲတွင် အ ကောင်းဆုံး အနေအထားတစ်ရပ်ရှိနေ သည်။
ယင်းကြောင့် သုံးစွဲသူအများစုမှာ မကြာခင်ကာလတွင် ဝန်ဆောင်မှုပေး တော့မည့် မိုဘိုင်းအော်ပရေတာများ ကြောင့် အင်တာနက်မြန်နှုန်းများ ပိုမို ကောင်းမွန်မည် ဟု မျှော်လင့်ထားပြီး မိုဘိုင်းအင်တာနက်ကို လက်ရှိထက် ပိုမို သုံးစွဲရန် စောင့်ဆိုင်းနေကြသည်။
မိုဘိုင်းအင်တာနက် မြန်နှုန်းများ နှင့် ပတ်သက်၍ မိုဘိုင်းကျွမ်းကျင် ပညာရှင် ကိုစည်သူက အော်ပရေတာ များကြောင့် မိုဘိုင်းအင်တာနက် သုံးစွဲ သူမြင့်မားလာမည် ဆိုသော်လည်း မို ဘိုင်းဖုန်းတစ်ခုတည်းဖြင့် အင်တာနက် သုံးစွဲသည့်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရသည့် လုပ်ငန်းများ ပြုလုပ်နိုင်မည် မဟုတ် ကြောင်း၊ Download, email စသည့် ကိစ္စများမှာကွန်ပျူတာဖြင့် ပို၍အဆင် ပြေသည့်အတွက် အင်တာနက်ဆိုင်များမှာ ဆက်ရှိနေဦးမည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံ တကာတွင် အင်တာနက်ဆိုင်များ ဆက်လက်ရပ် တည်နေကြောင်း သူ့အမြင်ကို ပြောသည်။
ဆီးရီးယားရှိ အယ်လ်ကေဒါ စစ်ဆင်ရေးများတွင် အီရန်မှ ကူညီနေသည်ဟု အမေရိကန် စွပ်စွဲ
အီရန်အခြေစိုက် အယ်လ်ကေဒါ အဖွဲ့အစည်းများမှ ဆွန်နီ တိုက်ခိုက်သူများကို ဆီးရီးယားသို့ စေလွှတ်ရာတွင် အီရန်မှ အကူအညီ ပေးနေကြောင်း အိုဘားမား အစိုးရမှ ကြာသပတေးနေ့တွင် စွပ်စွဲခဲ့သည်။ အမေရိကန် ဘဏ္ဍာရေးဌာနမှ အီရန် အကြမ်းဖက်သမား ကွန်ယက်များကို ပစ်မှတ်ထား ချမှတ်ခဲ့သည့် စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှု အသစ်၌ အီရန် အရာရှိများသည် ဆီးရီးယား စစ်ပွဲတွင် အတိုက်အခံများကို ကူညီထောက်ပံ့နေကြောင်း စွပ်စွဲမှု ပါဝင်သည်။
အမေရိကန်၏ စွပ်စွဲမှုကို အီရန်မှ ငြင်းပယ်ခဲ့ပြီး ဝါရှင်တန်သည် တီဟီရန်၏ နူကလီးယား အစီအစဉ်ကြောင့် နိုင်ငံတကာနှင့် သံတမန် ဆက်ဆံရေးကို ထိခိုက်စေရန် ကြိုးစားနေကြောင်း ပြန်လည် ပြောဆိုခဲ့သည်။
အီရန်အခြေစိုက် အစ္စလာမ်မစ် ဂျီဟတ်အဖွဲ့အစည်းမှ အိုလင်မ်ဟွန် အဒ်ခါမိုဗစ်ခ်ျ ဆာဒီကော့ဗ်သည် အယ်လ်ကေဒါ အကြမ်းဖက်ကွန်ယက် အတွက် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာနှင့် လက်နက်ကိရိယာများကို ထောက်ပံရန် အီရန် အရာရှိများနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းကို အမေရိကန် ဘဏ္ဍာရေးဌာနမှ ဖော်ပြထားသည်။ ဂျဖာအယ်လ်ဥဇဘတ်ကီ ဟုလည်း ခေါ်ဆိုကြသည့် ဆာဒီကော့ဗ်နှင့် ဂျဖာမူဒီနော့ တို့သည် အာဖဂန်နစ္စတန် နယ်ခြားအနီး အီရန်ရှိ မာက်ရှဟတ်တွင် အခြေစိုက်ပြီး အယ်လ်ကေဒါ လူသစ်များနှင့် နိုင်ငံရပ်ခြား ကြေးစား တိုက်ခိုက်သူများကို ဗီဇာများနှင့် ပတ်စ်ပို့တ်များကို ထုတ်လုပ်ပေးလျက် ရှိသည်။
“ ဒီအမျိုးသားဟာ အစွန်းရောက်ဝါဒီတွေနဲ့ ကြေးစား တိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေကို ပါကစ္စတန်၊ အာဖဂန်နစ္စတန်နဲ့ အီရန် နိုင်ငံတွေကြားမှ သွားလာနိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးနေပါတယ် ” ဟု ဘဏ္ဍာရေးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ပါဝင်သည်။ ဥဇဘက်ကီသည် အီရန်အခြေစိုက် အယ်လ်ကေဒါ ခေါင်းဆောင် ယာဆင်အယ်လ်ဆူရီအတွက် ဘဏ္ဍာရေးကို အဓိကပံ့ပိုးသူ ဖြစ်ကြောင်းလည်း ထုတ်ပြန်ချက်၌ ပါဝင်သည်။ အတွေ့အကြုံရှိသော တိုက်ခိုက်ရေးသမားများကို ပါကစ္စတန်မှ ဆီးရီးယားသို့ ပို့ဆောင်လျက် ရှိသည့် အယ်လ်ကေဒါ၏ လုပ်ဆောင်မှုများတွင် တာဝန်ရှိသူအဖြစ် အယ်လ်ဆူရီအား သံသယရှိကြသည်။
အီရန်ရှိ အယ်လ်ကေဒါ ကွန်ယက်သည် ဂတ်ဖ်ပင်လယ်အော်မှ အလှုငွေများကို ဆီးရီးယားရှိ Nusra Front အဖွဲ့နှင့် အခြား အယ်လ်ကေဒါ အဖွဲ့အစည်းများအတွက် ဖြန့်ဖြူးလျက် ရှိကြောင်း၊ ကူဝိတ်ရှိ ဂျီဟတ်အလှုရှင်များမှ ငွေကြေးများကိုလည်း တူရကီမှ တစ်ဆင့် ဆီးရီးယားသို့ ပို့ဆောင်နေကြောင်း ဟုလည်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ပါဝင်သည်။
အီရန်သည် ဆီးရီးယား သမ္မတ ဘာရှားအယ်လ်အာဆတ်၏ အဓိက မဟာမိတ်ဖြစ်ပြီး စစ်ရေး၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် သံတမန်ရေးရာများကို အဓိက ထောက်ပံနေသည်။ အီရန်၏ တော်လှန်ရေး တပ်သားများမှ ရှီးအိုက် တိုက်ခိုက်ရေးသမားများကို အာဆတ တပ်ဖွဲ့များအတွက် လေ့ကျင့်ပေးနေကြောင်း အမေရိကန်မှ မကြာခဏ စွပ်စွဲလေ့ရှိသည်။ Nusra Front အဖွဲ့သည် အာဆတ်၏ တပ်ဖွဲ့များကို ဆီးရီးယားတောင်ပိုင်းတွင် တိုက်ခိုက်လျက်ရှိပြီး အမေရိကန်မှ အယ်လ်ကေဒါနှင့် ပတ်သတ်သော အဖွဲ့အစည်း အဖြစ် ၂၀၁၂ တွင် အမည်ပျက်စာရင်း သွင်းထားခဲ့သည်။
သိပ္ပံပညာရှင်များ သက်တမ်း နှစ်ပေါင်း ရှစ်သိန်းကြာ ခြေရာများအား အင်္ဂလန်တွင် တွေ့ရှိ
အင်္ဂလန်တွင် သက်တမ်းနှစ်ပေါင်း ရှစ်သိန်းကျော်ရှိ လူသားခြေရာများအား တွေ့ရှိခဲ့ကြသည်ဟု ရှေးဟောင်း သုတေသန ပညာရှင်များမှ သောကြာနေ့တွင် ကြေငြာခဲ့သည်။ အာဖရိကတိုက် အပြင်ဘက်တွင် တွေ့ရှိရသမျှ ခြေရာများထဲ၌ ရှေးအကျဆုံး ဖြစ်ပြီး တောင်ပိုင်း ဥရောပတွင် လူသားတည်ရှိခဲ့မှု အစောဆုံး သက်သေပင် ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုသွားသည်။
အင်္ဂလန် အရှေ့ပိုင်း ကမ်းခြေရှိ ဟာပစ်ဘတ်မှ မြစ်ဝအနီး ရှေးကတည်းက ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ရွှံနွံများထဲတွင် ၎င်းခြေရာများကို ဗြိတိသျှ ပြတိုက်၊ လန်ဒန် သဘာဝသမိုင်း ပြတိုက်နှင့် လန်ဒန် တက္ကသိုလ်တို့၏ ပူးပေါင်း ရှေးဟောင်း သုတေသန အဖွဲ့မှ ရှာဖွေတွေ့ရှိ ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့သော နှစ်က လှိုင်းလုံးများ ရိုက်ခတ်မှု ကြောင်း ထွက်ပေါ်လာသော ၎င်းခြေရာများသည် နှစ်သိန်းချီပြီး ရွှံမြေများနှင့် သဲလွှာအထပ်ထပ်တို့ ဖုံးအုပ်ထားခြင်း ခံရသောကြောင့် မပျောက်မပျက် တွေ့ရှိရခြင်း ဖြစ်သည်။ ဗြိတိသျှ ပြတိုက်မှ ရှေးဟောင်းသုတေသန ပညာရှင် နစ်ခ်အက်ရ်ှတန်မှ ၎င်းရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကို “ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရှေးဟောင်း လူသားမျိုးနွယ်နဲ့ ဆက်နွယ်နေတဲ့ ထင်ရှားတဲ့ သက်သေတစ်ခု ” ဟု ပြောဆိုခဲ့သည်။ ရှေးအကျဆုံးသော ဘိုးဘွားများ အကြောင်းကို သိသာထင်ရှားစွာ ပုံရိပ်အဖြစ် လျှပ်တစ်ပြက် မြင်လိုက်ရခြင်းပင် ဖြစ်ကြောင်းလည်း အက်ရ်ှတန်မှ ပြောကြားခဲ့သည်။
၎င်းခြေရာများတွင် အနည်းဆုံး ကလေးငယ် နှစ်ဦးနှင့် အရွယ်ရောက်ပြီး ယောက်ျားတစ်ယောက်၏ ခြေရာများ ပါဝင်သည်။ ကျွဲရိုင်များ၊ ရှေးဟောင်းဆင်များ၊ ကြံ့များနှင့် ရေမြင်းများ ကျက်စားရာ ရှေးဟောင်း သိမ်းမြစ်နံဘေး မြက်တောများတွင် အစာရှာဖွေလျက်ရှိသော မိသားစုတစ်ခုမှ ဖြစ်မည်ဟု ခန့်မှန်းကြသည်။
ဆောက်သမ်တန် တက္ကသိုလ်မှ ပါမောက္ခ ကလိုက်ဂမ်ဘယ်သည် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သော အဖွဲ့တွင် ပါဝင်မှု မရှိခဲ့သော်လည်း ၎င်းတွေ့ရှိမှုကို အလွန်ပင် အရေးပါသော တွေ့ရှိမှုအဖြစ် ပြောဆိုခဲ့သည်။ “ ဒါဟာ အရမ်းကို အရေးပါတဲ့ သက်သေတစ်ခုပါ။ ရှေးဟောင်းလူသားမျိုးနွယ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အနီးစပ်ဆုံး တွေ့ရှိမှုပါ ” ဟု မစ္စတာ ဂမ်ဘယ်မှ ပြောကြားသွားသည်။
၎င်းခြေရာများသည် ဗြိတိန်တွင် ပထမဆုံး လူသားအခြေချမှု အချိန်အဖြစ် သိပ္ပံပညာရှင်များ အစောပိုင်းတွင် ခန့်မှန်းထားသော နှစ်များထက် နှစ်ပေါင်းတစ်သိန်းကျော် ပိုမိုရှေးကျလျက် ရှိသည်။ သိပ္ပံပညာရှင်များမှ ၎င်းခြေရာများ၏ မြေသား အနေအထားနှင့် အနီးရှိ ကျောက်ဖြစ် ရုပ်ကြွင်းများကို ကာဗွန်သက်တမ်း စစ်ဆေးပြီး သက်တမ်း သက်မှတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
နှစ်တစ်သန်း နီးပါးထင်ကျန်ခဲ့သော ၎င်းခြေရာများမှာ တွေ့ရှိပြီး နှစ်ပတ်အကြာတွင် တောင်ပိုင်း ပင်လယ်လှိုင်းလုံး ရိုက်ခတ်မှု ကြောင့် ပျက်စီးသွားခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် ၎င်းခြေရာများ တွေ့ရှိရာ ဟာပစ်ဘတ် တစ်ဝိုက်တွင် သုတေသန လုပ်ငန်းများကို ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားကြမည် ဖြစ်သည်။
တနှစ်ခွဲကြာ ၀န်းရံပိတ်ဆို့မှု ခံခဲ့ရတဲ့ ဆီးရီးယား ပြည်သူ ၈၃ ဦး ကယ်ထုတ်
ဆီးရီးယားအစိုးရတပ်တွေရဲ့ တနှစ်ခွဲကြာ ၀န်းရံပိတ်ဆို့ခံခဲ့ရတဲ့ ဟုမ်းမြို့က အရပ်သားတွေကို ကယ်ထုတ်နေရာမှာ ဖေဖော်ဝါရီလ ၇ ရက်နေ့က ပထမအသုတ်အနေနဲ့ ခလေးနဲ့ လူကြီး ၈၃ ဦးကို ကယ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ ထောက်ပံ့ရေး အစီအစဉ်တွေအတွက် ၃ ရက်ကြာ အပစ်အခတ် ရပ်စဲထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ကယ်ထုတ်လာခဲ့တဲ့ သူတွေဟာ အစာအာဟာရ ပြတ်လပ်နေတဲ့ပုံပေါ်တယ်လို့ ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့က ဆိုခဲ့ပြီး ကျန်ရစ်နေသေးတဲ့လူတွေကိုလည်း ထောက်ပံ့ရေးတွေ ဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အခုလို ဟုမ်းမြို့ခံတွေကို ကယ်ထုတ်မှုနဲ့ အကူအညီထောက်ပံ့မှုတွေဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ ပတ်ကျော်က ကျင်းပခဲ့တဲ့ ဆီးရီးယားငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲရဲ့ ပထမဆုံးရလဒ်အဖြစ် အများက ယူဆကြပါတယ်။ ယခင်ကလည်း အခုလိုကယ်ထုတ်ဖို့ ကမ်းလှမ်းမှုတွေရှိခဲ့ဖူးပေမယ့် မြို့ထဲမှာ ကျန်ခဲ့မယ့် သူပုန်တွေအပါအ၀င် ဒေသခံ အမျိုးသားတွေရဲ့ ကံကြမ္မာအတွက် စိုးရိမ်ရတာကြောင့် အမျိုးသမီးတွေနဲ့ ခလေးတွေကို ကယ်ထုတ်ဖို့ သူပုန်တွေက ငြင်းပယ်ခဲ့ကြပါတယ်။
အခုလိုကယ်ဆယ်မှုတွေနဲ့ ထောက်ပံ့မှုတွေဟာ လာမယ့်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ ထပ်မံကျင်းပဖို့ စီစဉ်ထားတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေဆီသွားမယ့် ခြေလှမ်းတွေအဖြစ် ထင်မြင်ယူဆ နေကြပါတယ်။ ဟုမ်းမြို့ထဲမှာ ပိတ်မိနေသူ အရပ်သား ၂၅၀၀ လောက်ရှိမယ်လို့ ခန့်မှန်းကြပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ဖလား ကျင်းပမည့် ဘောလုံးကွင်းစီမံကိန်းနှင့် မလွတ်ကင်းသည့် နေအိမ်တွေ ဖယ်ရှား
၂၀၁၄ ကမ္ဘာ့ဖလားဘောလုံးပွဲ ကျင်းပဖို့ အချိန်နီးကပ်လာတာနဲ့ ဘရာဇီးနိုင်ငံ ရီယိုဒီဂျနေရိုးမြို့က မာရာကနာ ဘောလုံးကွင်းစီမံကိန်းနဲ့ မလွတ်ကင်းတဲ့ နေအိမ်တွေကို ရီယိုမြို့အာဏာပိုင်တွေက ဖယ်ရှားနေပါတယ်။
ဖယ်ရှားခံရတဲ့နေအိမ်မှာ ၁၇ နှစ်ကျော် နေလာခဲ့တဲ့ ရီယိုမြို့ခံတဦးက ပြီးခဲ့တဲ့ ၆ လကစပြီး ရီယိုမြို့တော်စည်ပင်က မြေတွေလိုက်သိမ်းနေတာပါ။ မြေတွေသိမ်းပြီးတော့ အခု ကျနော်တို့ အကြာကြီးနေခဲ့တဲ့ အိမ်တွေကို လာသိမ်းနေပြန်ပြီလို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
ကျနော်တို့ နေခဲ့တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖြိုဖျက်နေတာ မြင်ရတော့ စိတ်မကောင်းဘူးလို့ နေအိမ်ဆုံးရှုံးခဲ့သူ ရီယိုမြို့ခံတဦးက ဆိုပါတယ်။ ရီယိုမြို့ အိုးအိမ်ဌာနက အတွင်းရေးမှူး ပီရဲ ဘတစ်တာ က အိမ်ထောင်စု ၇၀၀ ကျော်ကို နေရာပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပေမယ့် နေအိမ်အစားပြန်ပေး ပါတယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
နေအိမ်ဟောင်းမှာပဲ နေချင်တဲ့ ဘက်ဗားဒို ဘတ်ဇီရာ က ရေစီးရေလာကောင်းအောင် သန့်ရှင်းရေးတွေ လုပ်ပေးလိုက်ရင် အိမ်ဟောင်းမှာပဲ ဆက်နေလို့ ရပါတယ်လို့ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲသာ မဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ အဲ့ဒီမှာပဲ ဆက်နေဖြစ်မှာပါ။ ကမ္ဘာ့ဖလားကြောင့် အပြောင်းအလဲတွေ အများကြီး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အခုဆို ဘယ်ပဲသွားသွား ကမ္ဘာ့ဖလား ကမ္ဘာ့ဖလားပဲ ဖြစ်နေကြတယ်လို့ ဆက်ပြောခဲ့ပါတယ်။
ရတနာပုံတယ်လီပို့အများ ပိုင်ကုမ္ပဏီမှ အခမဲ့ဖုန်းခေါ်ဆို ခွင့်မိနစ် ၂၀၀၊ sms အစောင် ယင်းသို့ရောင်းချရာတွင် အခမဲ့ဖြန့်ဝေသည့်စနစ်နှင့် ကျပ် ၁၅၀၀ဖြင့် ရောင်းချသည့်စနစ် နှစ်မျိုးဖြင့် ဂျီအက်စ်အမ်မိုဘိုင်း ဆင်းကတ်များကို ရောင်းချမည် ဖြစ်ပြီး ကနဦးအနေဖြင့် ရန်ကုန်၊ နေပြည်တော်နှင့် မန္တလေးမြို့ကြီး များတွင် စတင်ရောင်းချနိုင်ရန် အတွက် 2G, 3G ကွန်ယက်ရ ရှိမည့် အဆောက်အဦပိုင်းဆိုင် ရာများကို လက်ရှိတွင်ဆောက် လုပ်လျက်ရှိကြောင်း ရတနာပုံ တယ်လီပို့အများပိုင်ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကပြော သည်။
““နိုင်ငံတကာအရည်အ သွေးအတိုင်းအသုံးပြုနိုင်မယ့် ဂျီအစ်အမ်ဆင်းကတ်တွေကို အလကားဖြန့်ဝေပေးတဲ့စနစ်၊ ၁၅၀၀နဲ့ရောင်းပေးတဲ့စနစ်စ တဲ့ပုံစံတွေနဲ့ရောင်းချပေးသွား မှာပါ။ ဖုန်းနံပါတ်တွေက ဂဏန်း ၁၀လုံးလောက်ဖြစ်မယ် ထင်ပါ တယ်””ဟု ယင်းကပြောသည်။ ရတနာပုံတယ်လီပို့အများ ပိုင်ကုမ္ပဏီလိမီတက်အနေဖြင့် ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းဝန် ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် အမေရိကန် ၁ ဒသမ ၅ ဘီလျံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသွားမည်ဖြစ်ပြီး သြ ဂုတ်လအတွင်း မိုဘိုင်းဖုန်းများ ရောင်းချနိုင်ရေးအတွက် နည်း ပညာပိုင်းဆိုင်ရာများမှာ ၇၅ရာ ခိုင်နှုန်းပြီးနေ ပြီဖြစ်ကြောင်း ရတနာပုံတယ်လီပို့အများပိုင် ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။ ဖုန်းလိုင်းအရေအတွက် ၁၀သန်းရောင်းချခွင့် ရထားပြီး နိုင် ငံခြား ကုမ္ပဏီ များနှင့် ပူး ပေါင်းလုပ်ကိုင်ရန် စီစစ်မှု များ ပြုလုပ်နေကြောင်းနှင့် မြန် မာ နိုင်ငံတွင် ငါးနှစ်အတွင်း ဖုန်းအ သုံးပြုသူ ၈၅ရာခိုင်နှုန်းအထိ ရှိအောင် ဆောင်ရွတ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ယင်းနှင့်ပတ်သက်၍ နိုင်ငံ တကာ အတွေ့အကြုံရှိသူတစ်ဦး က““ကျွန်တော်တို့သိတာက အ လကားဖြန့်တာက ဖုန်းဟမ်း ဆက် ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ပေါင်းပြီး ဟမ်းဆက် ရောင်းရင်းနဲ့ တစ်ခါတည်း ဆင်း ကတ်ပါထည့်ပေးတာ ဖြစ်မယ် ထင်ပါ တယ်။ အဓိကကတော့ သူ တို့ရဲ့ လေလှိုင်းထဲက ဖုန်းပြောခ ကို ဘယ်လိုသွားမလဲ။ တယ်လီ နောတို့ အော်ရီဒူးတို့လိုပဲ ၂၅ကျပ် နဲ့သွားမလား။ ဒါကိုလဲ ပြောသင့် ပါတယ်”” ဟု ပြောပြ သည်။
၅၀အခမဲ့ပို့ခွင့်များပါသော ဂျီအက်စ်အမ်မိုဘိုင်းဆင်းမ်ကတ်များ ကို သြဂုတ်လအ တွင်း ရောင်း ချ နိုင်ရန်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
N H [--Myanmar News Network--]
အမှန်တကယ်နေရာစရမရှိတဲ့ သူတွေကို နေစရာရှာပေးပြီးမှ ရှင်းလင်းသင့် (မေးမြန်းခန်း)
ပိုင်ရှင်ရှိရက်နဲ့ ကျုးကျော်နေသူတွေကို ဥပဒေနဲ့အညီ ကိုင်တွယ်ဖို့လိုပြီး အမှန်တကယ်နေစရာ မရှိတဲ့ သူတွေကိုတော့ နေစရာရှာပေးပြီးမှ ရှင်းလင်းလုပ်ဆောင်ဖို့ သင့်တယ်လို့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်မောင်ဆွေက သုံးသပ် ပြောကြားပါတယ်။
အခုရက်ပိုင်း အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေက ဦးဆောင်ပြီး ရန်ကုန်တိုင်းထဲ ကျုးကျော်အိမ်တွေ ဆက်တိုက် ရှင်းလင်း လုပ်ဆောင်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာမှာ သူက ခုလို ပြောလိုက်တာပါ။
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်မောင်ဆွေကို ဒီဗွီဘီ ၀ိုင်းတော်သား ဦးရွှေအောင်က ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။
ပျောက်ဆုံးနေသော ဗုဒ္ဓဓာတ်တော်ကြုပ် ကမ္ဘောဒီးယားရဲတပ်ဖွဲ့ ပြန်လည်တွေ့ရှိ
ဖနောင်ပင်၊ ရန်ကုန်၊ ဖေဖော်ဝါရီ-၇
၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း ခိုးယူခံခဲ့ရသော ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်၏ဓာတ်တော်များ
သီတင်းသုံးရာ ရွှေကြုပ်တော်ကို ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ပြန်လည်ရှာ
ဖွေတွေ့ရှိပြီဖြစ်ကြောင်း ကမ္ဘောဒီးယားအစိုးရ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက
ဖေဖော်ဝါရီ ၇ ရက်တွင်ပြောကြားသည်။
ဖနောင်ပင်မြို့တော် မြို့ပြင်ကီလိုမီတာ ၄၀ ခန့်အကွာတွင်တည်ထားသော
တောင်ပေါ်စေတီတစ်ဆူ၌သီတင်းသုံးသည့် အဆိုပါ ဗုဒ္ဓဓာတ်တော်ကြုပ် သည် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ လလယ်ပိုင်းတွင် ပျောက်ဆုံးခဲ့ရသည်။
ခိုးယူခံခဲ့ရသည့် ဗုဒ္ဓဓာတ်တော်ကြုပ်ကို ကမ္ဘောဒီးယားတောင်ပိုင်း တာကီအိုပြည်နယ်ရှိ နေအိမ်တစ်အိမ်၌ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ဖေဖော်ဝါရီ ၆ ရက်တွင် ပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့ပြီး အိမ်ရှင်အမျိုးသားတစ်ဦးအား ဓာတ်တော်ကြုပ်
ပျောက်ဆုံးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားကြောင်း
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အများစုနေထိုင်ရာ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၏ ဘာသာရေးနှင့်
ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ပြယုဂ်တစ်ရပ်ဖြစ်သည့် ဗုဒ္ဓဓာတ်တော်ကြုပ်အခိုးခံရမှု
ကြောင့် ကမ္ဘောဒီးယားတစ်နိုင်ငံလုံး မကျေမနပ်ဖြစ်ခဲ့ကြပြီး ဓာတ်တော်
ကြုပ် ပြန်လည်ရရှိရေးအတွက် အာဏာပိုင်များအား ဖိအားပေးတောင်းဆို ခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါ ဓာတ်တော်ကြုပ်အတွင်း နတ်ရွာစံကမ္ဘောဒီးယားဘုရင်
နိုရိုဒွန်သီဟာနု လက်ထက် ၁၉၅၇ ခုနှစ်တွင် ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဖွားတော်မူ သည့်နှစ် ၂၅၀၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံက ကမ္ဘောဒီးယားအစိုးရထံပေးအပ်ခဲ့သည့် ဗုဒ္ဓဓာတ်တော်များ စံပယ်
မလေးရှားတွင် လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခြင်းခံရသော ကိုအောင်ကြီး၏ ဇနီး မအေးသန္တာထွေး၏ ရင်တွင်းစကား
မလေးရှားမှာ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ၈၈ မျိုးဆက်အဖွဲ့မှ ကိုအောင်ကြီး သေဆုံးမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူ့ဇနီးနဲ့ မိသားစုတွေမှာလည်း သောကတွေ ဂယက်ပွေပြီး ကြိတ်မနိုင် ခဲမရဖြစ်နေကြရပါတယ်။ ယောက်ျားဖြစ်သူ ကိုအောင်ကြီးအတွက် ရက်လည်ဆွမ်းသွပ် ဆောင်ရွက်ဖို့ စီစဉ်နေတဲ့ မအေးသန္တာထွေးကို Myanmar National Network မှ ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။
ကိုအောင်ကြီး အသက်ဆုံးရှုံးရသည်အထိ လုပ်ကြံခံရမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုသံသယ ရှိပါသလဲအမ။
အမဘယ်လို မှန်းဆနိုင်မှာလည်း။ အမ ယောက်ျားကို ကျားနာခဲနဲ့ ရက်ရက်စက်စက် လုပ်သွားတယ်။ လက်တုန့်ပြန်ချင်တဲ့စိတ် ဖြစ်မိတယ်။
အမ မိသားစု အခြေအနေလေး ပြောပေးပါလား အမ။
မိဘတွေနဲ့ပဲနေပါတယ်။ သားအကြီးက နဝမတန်း။ သမီးငယ် ၄ လအရွယ်မှာ အမယောက်ျား ထွက်သွားခဲ့တာ။ အခုသမီးလေး ၁၁ နှစ်ရှိပြီ။ ကြားထဲမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၉လပိုင်းမှာ အမနေမကောင်းဖြစ်တယ်။ အဲဒီတော့မှ အဆက်အသွယ် ပြန်ရတယ်။ သူမသေဆုံးမီတစ်ပတ်လောက်ကပဲ သားသမီးတွေနဲ့ စကားပြောပါသေးတယ်။ သားဆိုရင်လည်း သူ့အဖေအတွက် ကြိတ်မနိုင်ခဲမရဖြစ်နေတယ် လို့ ပြောပါတယ်။
ကိုအောင်ကြီး၏ ဇနီးအတွက် အားပေး ကူညီသည့်အနေဖြင့် ကိုရဲမင်းဦး နှင့် Myanmar National Network မှ ကိုသီရိ ကိုမောင်မောင်ခတို့က ဦးဆောင်၍ သွားရောက် အားပေး နှစ်သိမ့်ရင့် အလှူငွေ တစ်သိန်းပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
တိုက်ကြီး၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၇
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တိုက်ကြီးမြို့နယ် ဥက္ကံမြို့ပိုင် ပဲခူးရိုးမ အနောက်ခြမ်းအတွင်း တိုင်းသစ်တောဦးစီးဌာန၊ သစ်တောနှင့် သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများ ဖမ်းဆီးရေးစခန်းအမှတ် (၄) တွင် သစ်မှောင်ခိုသမားများဟု ယူဆရသူ လေးဦးက ဖေဖော်ဝါရီလ ၅ ရက်နေ့ ည ၈ နာရီ ၃၀ မိနစ်အချိန်တွင် ဝန်ထမ်းလေးဦးကို ဝါးတုတ်များဖြင့် ရိုက်နှက်ပြီး ယာယီတဲများ၊ ဆိုင်ကယ်များနှင့် ဖုန်းများကိုပါ မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်း ဥက္ကံမြို့သစ်တော တာဝန်ခံ တောအုပ်ကြီး ဦးမျိုးလွင်က ပြောကြားသည်။
ဝါးဖြူမြောင်စခန်းတွင် သစ်တောတာဝန် ထမ်းဆောင်နေသော သစ်တော နေ့စားဝန်ထမ်း ဦးကျော်ဝင်းနိုင် အိပ်ပျော်နေစဉ် ဝါးတုတ်များဖြင့် ဝိုင်းရိုက်ကြရာ ထွက်ပြေးခဲ့ရကြောင်း၊ ၎င်း၏ ကျပ်ငါးသိန်းတန် လောဂျားအမျိုးအစား ဆိုင်ကယ်ကိုလည်း မီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားကြောင်း၊ ဝါးဖြူမြောင်စခန်းနှင့် နှစ်မိုင်ခန့်ဝေးသော ကျောက်ကုတင် ယာယီစခန်းရှိ ဥက္ကံ သစ်တောကြိုးဝိုင်း အမှတ် (၄၁) တာဝန်ခံ တောအုပ် ဦးမျိုးမြင့်စိုးနှင့် သစ်တောနေ့စား ကိုမျိုးသောင်း တို့ကိုလည်း ဝါးတုတ်များဖြင့် ထိုးကြိတ် ရိုက်နှက်သွားပြီး စခန်းရှိ ကျပ်နှစ်သိန်းတန် ဆိုင်ကယ်နှင့် ဖုန်းနှစ်လုံးကိုလည်း မီးရှို့ဖျက်ဆီး သွားကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
သစ်တောဝန်ထမ်း သုံးဦးကို တိုက်ခိုက်ပြီး မီးရှို့ကြသူများမှာ ဖလုံးဘူတာနေ ကိုဇော်မင်း၊ ဥတိုကျေးရွာနေ ကိုဖိုးဇော်၊ ကိုဝင်းရွှေနှင့် အမည်မသိ အမျိုးသားတစ်ဦးတို့ဖြစ်ပြီး အဆိုပါလေးဦးက သစ်လုံးများ တင်ဆောင်လာစဉ် သစ်ကားတစ်စီးလျှင် ဆက်ကြေးအဖြစ် ကျပ်လေးသောင်းမှ ငွေ လေးသောင်းခွဲ ပေးဆောင်ရမည် ဆိုသောကြောင့် ခိုက်ရန်ဒေါသ ဖြစ်သည်ဟု ကြားသိရကြောင်း ဝါးခုတ်ရန် တက်လာသည့် ဒေသခံ လှည်းသမားများက ပြောကြားသည်။
ယင်းဖြစ်စဉ်တွင် သစ်တောနေ့စား ဦးကျော်ဝင်းနိုင်မှာ ဦးခေါင်းညိုရောင်အန်း ပေါက်ပြဲဒဏ်ရာ၊ နယ်မြေခံတောအုပ် ဦးမျိုးမြင့်စိုးမှာ ဝဲမျက်လုံး ဖူးရောင်နှင့် ခါးအတွင်းဒဏ်ရာနှင့် သစ်တောနေ့စား ဦးမျိုးသောင်း ဝဲမျက်လုံးဖူးရောင်၊ နားထင်ပေါက်ပြဲ ဒဏ်ရာများ ရရှိခဲ့ကြောင်း ဥက္ကံမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းထံမှ သိရသည်။
အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ ဥက္ကံ ရဲစခန်း (ပ)၂၅/၂၀၁၄၊ ပြစ်မူဆိုင်ရာဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၃၂/၄၃၆ ဖြင့် အမူဖွင့်ပြီး ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်နေသော ဖလုံးဘူတာနေ ကိုဇော်မင်း၊ ဥတိုကျေးရွာနေ ကိုဖိုးဇော်၊ ကိုဝင်းရွှေနှင့် အမည်မသိ ၂၅ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦးတို့ကို ရှာဖွေစုံစမ်းလျက် ရှိကြောင်း ယင်းရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းထံမှ သိရသည်။
ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ လေ့လာတွေ့ရှိမှုများထဲက တစ်ခုပါပဲ။ ယင်းကတော့ ဖုန်းနဲ့ Message ရိုက် ပို့ခြင်းဟာ ဥာဏ်ကောင်းစေတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ပဲ ဖြစ် ပါတယ်။ အဖြစ်က ဒီလိုပါ။
Test Message (SMS) ရည်ရွယ်ချက်က စာတိုတိုနဲ့ လိုရင်း ရောက်အောင် ရေးလို့ ပို့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ စာလုံး Character အလုံး ၁၆၀ ထပ်မပိုရဘူးလို့ ဆိုထားပေမယ့် တော်တော်များများကတော့ စာလုံး နည်းနည်းနဲ့ ရောက်အောင်ရေးလို့ ပို့ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အင်္ဂလိပ် အတိုကောက်သုံးတာမျိုး၊ အလွယ်ဆုံး ဝါကျဖွဲ့လိုက်တာ မျိုး၊ အဓိပ္ပါယ်ချက်ချင်း သိစေနိုင်မယ့် စာတိုတို ဖြစ်အောင် ရေးစပ်တာမျိုး အစရှိသဖြင့် ဦးနှောက်စားစေပြီး ဥာဏ်ကို အသုံးချစေပါတယ်။ အင်္ဂလိပ် သဒ္ဒါ တည်ဆောက်မှု အတတ်နိုင်ဆုံးမှန်အောင်ကြိုးစားမှုလည် ရှိသလို အချို့ ကျတော့လည်း အဆင်ပြေတဲ့ အသံထွက်နဲ့ တစ်ဖက်နားလည်အောင် ကြိုးစား ရေးသား ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ ရိုက်တာက ပိုကောင်းပြီး အင်္ဂလိပ် စာ ဝါကျ ဖွဲ့မှုကိုလည်း ပိုမိုတိုးတက်စေပါတယ်။ သို့ပေမယ့် အခြား ဘာသာ သို့မဟုတ် ကိုယ်အဆင်ပြေတဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ ရေးသားပေးပို့ခြင်းက လည်း ဥာဏ်သုံးရတဲ့အတွက် ဦးနှောက် ကို အလုပ်လုပ်စေပါတယ်။
ဒါကြောင့် SMS ပို့ခြင်းဟာ ဥာဏ်ကိုကောင်းစေပြီး IQ လယ်ဗယ် မြင့်စေ တယ်လို့ လေ့လာချက်များက ဆိုထားကြောင်း သိရပါတယ်။
အိမ်ဈေးက လက်လီဆိုင်များ ဖွံ့ဖြိုးရေးကို ခက်ခဲနေစေ
ဖွံ့ဖြိုးလာခါစ Convenience Store များသည် နိုင်ငံခြားမှ ပြိုင်ဖက်လုပ်ငန်းများ ၀င်ရောက်မလာမီ အခြေတကျဖြစ်ရန် ကြိုးစားနေကြသည်။ (ဓာတ်ပုံ- ဂျေပိုင်/ဧရာဝတီ)
အမြတ်အစွန်း ပြန်လည်ရရှိမှု နည်းပါးနေသေးသည့် အချိန်တွင် အိမ်ခြံမြေဈေးနှုန်းများ အဆမတန်မြင့်တက်နေမှုကြောင့် အခက်အခဲတွေ့နေရသည့် ရန်ကုန်မြို့မှ ပြည်တွင်း လုပ်ငန်းရှင်များ၏ ဖွံ့ဖြိုးလာခါစ Convenience Store (အချိန်မရွေး ဝယ်ယူနိုင်သော ကုန်မျိုးစုံ လက်လီဆိုင်) များသည် နိုင်ငံခြားမှ ပြိုင်ဖက်လုပ်ငန်းများ ၀င်ရောက်မလာမီ အခြေတကျဖြစ်ရန် ကြိုးစားနေကြသည်။
ပြီးခဲ့သော၂ နှစ်ခန့်ကာလအတွင်း City Mart Holdings၊ Myanmar Indo Best နှင့် Capital Hypermart စသည့် ပြည်တွင်း လုပ်ငန်းကြီးများ၏ Convenience Store များ ရန်ကုန်မြို့တွင် အများအပြား ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ ဆိုင်များသည် ရန်ကုန်မြို့၏ စီးပွားရေး အချက်အခြာနေရာများ၊ အများအားဖြင့် မြို့လယ်ရှိ ကျောက်တံတား၊ လသာ၊ ပန်းပဲတန်း၊ လမ်းမတော်၊ ပုဇွန်တောင် နှင့် ဗိုလ်တထောင် မြို့နယ်များတွင် စုပြုံတည်ရှိနေကြပါသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် Myanmar Indo Best ၏ ABC Convenience Store များ ရန်ကုန်မြို့ အနှံ့အပြားတွင် ဆိုင် ၅၀ ခန့် ရှိနေပြီး City Mart က City Express ဆိုင်ခွဲ ၃၀ ဖွင့်လှစ်ထားပြီး ဖြစ်၍ Capital Hypermart ၏ Grab & Go က ၁၀ ဆိုင် နီးပါးရှိနေသည်။
ခြေလျင်လျှောက်သွားကြသူများနှင့် ပုံမှန်ဝင်ရောက်လာပြီး ပစ္စည်း အနည်းငယ်ဝယ်ယူသွား တတ်သူများ အပေါ်တွင် မှီခို နေရသည့် Convenience Store များအတွက် လူနေထူထပ်ပြီး သွားလာရောင်းဝယ်ရေး လွယ်ကူ အဆင်ပြေသည့် နေရာဖြစ်ရန် လိုသည်။ သို့သော်လည်း လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် ကံမကောင်းသည့် အချက်မှာ ရန်ကုန်မြို့ တွင်းမှ အိမ်ခြံ မြေဈေးနှုန်းများနှင့် ငှားရမ်းခများက မတန်တဆမြင့်တက်လာနေခြင်း ဖြစ်သည်။ ကုန်ကျစားရိတ် ပိုမိုလာခြင်းကြောင့် လုပ်ငန်း ထိခိုက်ကျဆင်းမှုတွေလည်း ရှိလာစေ၏။
၂၀၁၂ ခုနှစ်ကထဲက ရန်ကုန်မြို့၏ အချက်အချာနေရာများတွင် City Express Convenience Store များဖွင့်လှစ်ရောင်းချ ခဲ့သော်လည်း အခုအချိန်အထိ လုပ်ငန်းမှ အမြတ်မပေါ်သေးကြောင်း City Mart Holding မှ ဒါရိုက်တာ ဒေါ်ဝင်းဝင်းတင့်က ပြောပြသည်။ ဆိုင်တဆိုင်ချင်းစီ အတွက် ကနဦးရင်းနှီးငွေ (ဆိုင်ခန်း ငှားရမ်းခ မပါ) ကျပ်သိန်း ၁၀၀၀ ခန့် အနည်းဆုံး သုံးစွဲခဲ့ရသည် ဟုလည်း သူက ဆိုသည်။
“လူစည်ကားတဲ့နေရာတွေမှာ နေရာကောင်းတခုရဖို့က ခက်နေတုန်းပါပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျမတို့က မြေညီထပ်မှာ ဆိုင်ဖွင့်နိုင်ဖို့လိုတယ်။ မြို့လယ်နေရာတွေမှာ ငှားရမ်းခက အရမ်းဈေးကြီးတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကျမတို့ ဆိုင်တွေ တိုးချဲ့ဖွင့်နိုင်ရေးမှာ ဒီပြဿနာက အဓိက ဖြစ်လာတယ်” ဟု ဒေါ်ဝင်းဝင်းတင့်ကပြောသည်။
မုန့်အမျိုးမျိုး၊ အဖျော်ယမကာ၊ စီးကရက်နှင့် အိမ်သုံးပစ္စည်း အသေးစားများ ရောင်းချပေးနေသည့် Convenience Store ဆိုင်များက ယခင်က ထိုပစ္စည်းများကို စူပါမားကက်ကြီးများ၊ ဈေးဝယ် စင်တာများတွင်သာ ၀ယ်ယူလေ့ရှိသော မြန်မာ နိုင်ငံသား အများအပြား၏ အလေ့အထကို ပြောင်းလဲပစ်နိုင်ခဲ့သည်။ ထိုလက်လီဆိုင်လေးများက တနေ့လျှင် ၂၄ နာရီ ဖွင့် လှစ်ရောင်းချနိုင်ခြင်းကလည်း ဆွဲဆောင်မှုတခုဖြစ်ပါသည်။
သို့သော်လည်း အဓိက အချက်ဖြစ်သည့် အဆင်ပြေလွယ်ကူမှုရှိစေရန်အတွက် နေရာက မြေညီထပ်တွင်ရှိရမည် ဖြစ်သည်။ မြေညီထပ်ဆိုသည်မှာလည်း ဈေးအကြီးဆုံးထဲမှာ ပါဝင်နေသဖြင့် ရွေးချယ်ရန် အကန့်အသတ် ရှိနေသည်။ ရန်ကုန်မြို့လယ် အချက်အချာရှိ ကျောက်တံတားမြို့နယ်အတွင်းမှ ဧရိယာ စတုရန်း ၁၂၀၀ ပေရှိသော မြေညီထပ်တခန်း၏ ငှား ရမ်း ခမှာ တလလျှင် ကျပ် သိန်း ၂၀ မှ ၅၀ ၀န်းကျင်ခန့်အထိ ခေါ်ဈေး ရှိနေသည်ဟု အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင် တဦးထံမှ သိရသည်။ ငှားရမ်းသူက အနည်းဆုံး ၁ နှစ် ငှားရမ်းဖို့လည်း သဘောတူ ရမည်ဖြစ်သည်။
“လမ်းငယ်လေးတွေထဲမှာဆိုရင်တော့ အဓိက လမ်းမကြီးတွေထက် ဈေးတ၀က်လောက် သက်သာတယ်။ ရန်ကုန်မှာ ကျောက်တံတားမြို့နယ်က ဈေးနှုန်းအမြင့်ဆုံးပဲ” ဟု ရန်ကုန်အခြေစိုက် Unity အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းမှ ဦး ဇော်ဇော်က ပြောသည်။
တနှစ်စာ ငှားရမ်းခမှာ အမြင့်ဆုံး ပျမ်းမျှ ကျပ်သိန်း ၅၀၀ ကျော်ခန့်ဖြစ်နေသည့်အတွက် အမြတ်အစွန်းရရှိရေးက မရေမရာဖြစ်နေသည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်းတွင် အမေရိကန်အခြေစိုက် Convenience Store လုပ်ငန်းကြီးတခုဖြစ်သည့် 7-Eleven က မြန်မာ နိုင်ငံ ဈေးကွက်သို့ ၀င်ရောက်လာတော့မည်ဟု သတင်းများ ထွက်ပေါ်ခဲ့ဖူးသည်။ 7-Eleven က အခြား အရှေ့တောင် အာရှ နိုင်ငံ အမြောက်အများတွင်လည်း ဆိုင်များဖွင့်လှစ် အောင်မြင်နေပြီဖြစ်သည်။
“ အနာဂါတ်မှာ Convenience Store တွေက အောင်မြင်တဲ့ လက်လီဈေးကွက်ပုံစံ ဖြစ်လာမယ်လို့ ကျမပြောနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီလုပ်ငန်းမှာ ၀င်လာမယ့် နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေနဲ့ ယှဉ်လုပ်နိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်ထားဖို့ လိုပါတယ်” ဟု ဒေါ်ဝင်းဝင်း တင့် ကပြောသည်။
ABC Convenience Store ဆိုင်များ၏ လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးရေး မန်နေဂျာ ဦးလင်းထိုက်က အိမ်ခြံမြေ ဈေးကွက် အခြေအနေကို သိနေသော်လည်း သူတို့ ကုမ္ပဏီက လုပ်ငန်းများကို တိုးချဲ့ရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ဟု ပြောပါသည်။
“ဈေးကွက်ပြိုင်ဆိုင်တဲ့ နေရာမှာ ဗျူဟာတခုအနေနဲ့ ဆိုင်ခွဲတွေကို များနိုင်သမျှ များများဖွင့်ပါမယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေ ပြည်တွင်းဈေးကွက်ထဲကို မကြာခင် ရောက်လာကြတော့မှာ ဖြစ်လို့ပါ” ဟု သူကဆိုသည်။ Convenience Store ဆိုင်များကြောင့် လူငယ်များအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ လည်းရှိလာလိမ့်မည် ဟု သူက ထပ်ပြောသည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် အကောင်အထည်ဖော်ရန် စီစဉ်ထားသည့် အာရှစီးပွားရေးအသိုက်အ၀န်း (ASEAN Economic Community) က ဒေသတွင်း အာဆီ ယံ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို မြန်မာနိုင်ငံဈေးကွက်သို့ ၀င်ရောက်ခွင့်ပေးရန် ရှိနေသည်။ AEC က ဒေသတွင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖြစ် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ အတွင်းတွင် ကုန်သွယ်ခွန်ကို သုည အထိလျှော့ချနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ထားသည်။
အခွန်မဆောင်သူများကို လာမည့် ဘဏ္ဍာနှစ်မှစတင် အရေးယူမည်
အခွန်စိစစ် ကြပ်မတ်ရေး ဘုတ်အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပြီးနောက်ပိုင်း အခွန်မဆောင်သူ လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ကုမ္ပဏီများကို အခွန်ပေးဆောင်ရန် ခေါ်ယူတွေ့ဆုံခြင်းများ ပြုလုပ်လျက် ရှိပြီး လာမည့် ဘဏ္ဍာနှစ် (၂၀၁၄-၂၀၁၅) မှစတင်၍ အခွန်ဥပဒေများနှင့်အညီ ကြပ်မတ် အရေးယူမည် ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ ဘုတ်အဖွဲ့ထံမှ သိရသည်။
“အခွန်မဆောင်တဲ့ သူတွေကို ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယအကြိမ်အထိတွေ့ပြီး သတိပေးသွားမယ်။ အဲဒါကိုမှ မပေးဘူးဆိုရင် အရေးယူမယ်” ဟု ပြည်တွင်းအခွန်များ ဦးစီးဌာနမှ အကြီးတန်း အရာရှိတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
အခွန် မပေးဆောင်သူများကို လာမည့် ဘဏ္ဍာနှစ်မှစတင်၍ စာရင်းအတိအကျ ကောက်ခံပြီး အခွန်ဥပဒေများဖြင့် အတိအကျ အရေးယူမည် ဖြစ်ကြောင်း အခွန်ဘုတ်အဖွဲ့ထံမှ သိရသည်။
ယင်းသို့ အခွန်မဆောင်သူများကို အခွန်ဥပဒေများအရ တစ်ဖတ်သက် စည်းကြပ်ခြင်း၊ အခွန်မဆောင်သူ၏ ဆိုင်အနီးမှ မည်သို့ အခွန်မဆောင်ခြင်းကို သတင်းယူခြင်းနှင့် ၎င်းပိုင် မရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည့် ပစ္စည်းများကို ဝရမ်းကပ်၍ လေလံတင်ခြင်း များကို ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း အခွန်စိစစ်ကြပ်မတ်ရေး ဘုတ်အဖွဲ့ထံမှ သိရသည်။
“စီးပွားရေးလုပ်တယ် ဆိုရင်တော့ အခွန်ပေးဆောင်ရမယ်။ နိုင်ငံသားမှန်ရင် အခွန်ပေးဆောင်ရပါမယ်။ ဒါပေမဲ့ မျှတတဲ့ အခွန်တော့ ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်” ဟု စီးပွားရေး မူဝါဒပညာရှင် ဒေါက်တာအောင်ကိုကိုက ပြောကြားသည်။
အခွန်စိစစ်ကြပ်မတ်ရေး ဘုတ်အဖွဲ့က စားသောက်ဆိုင် လုပ်ငန်းရှင်များ၊ ပြည်ပလေကြောင်းလိုင်းများ၊ ပြည်တွင်း အရက်ချက် လုပ်ငန်းရှင်များ၊ အဆင့်မြင့်ဈေးများ၊ ဘုရင့်နောင်နှင့် စော်ဘွားကြီးကုန်းရှိ ပွဲရုံ လုပ်ငန်းရှင်များကို ယခုဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း အခွန်လစဉ် ပေးဆောင်ရန်၊ ဝင်ငွေကြေညာလွှာ အချိန်မီတင်ရန်၊ အခွန်မပေးသူများ အခွန်ပြန်လည် ပေးဆောင်ရန်တို့အတွက် ခေါ်ယူတွေ့ဆုံပြီး ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ ဘုတ်အဖွဲ့ထံမှ သိရသည်။
၁၉၇၄ ခုနှစ် ဝင်ငွေခွန် ဥပဒေ ပုဒ်မ ၉ တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားချက်အရ တစ်လလျှင် လစာကျပ် တစ်သိန်းနှစ်သောင်းနှင့် အထက်ရရှိသူများသည် အခွန်ပေးဆောင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြည်တွင်းအခွန်များ ဦးစီးဌာနထံမှ သိရသည်။
ယင်းသို့ ပေးဆောင်ရာတွင် အိမ်ထောင်ရှင်များအနေဖြင့် တစ်လလျှင် ကျပ် ၁၈၀၀ နှင့် အိမ်ထောင်မရှိသူ လူလွတ်များမှာ ကျပ်နှစ်ထောင်ခန့် ပေးဆောင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း အခွန်နှုန်းထား သတ်မှတ်ချက်အရ သိရသည်။
မီဒီယာကို သည်းခံရန် နေပြည်တော်အား HRW တိုက်တွန်း
ဖေဖော်ဝါရီလ ၅ ရက်နေ့က သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင့် နေပြည်တော်တွင် တွေ့ဆုံခဲ့သည့် HRW ၏ အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ Kenneth Roth (ဓာတ်ပုံ- သမ္မတရုံး)
မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် စာနယ်ဇင်းများ၏ ဝေဖန်ထောက်ပြမှုကို လက်ခံရန်နှင့် စာနယ်ဇင်းသမားများက ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ ပုဒ်မများ အသုံးပြု၍ အရေးယူအပြစ်ပေးခြင်းကို ဖေယ်ရှားပေးရန် လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်မှုအဖွဲ့ (HRW) က တောင်း ဆိုလိုက်သည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံအခြေစိုက် ကမ္ဘာလုံး ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့အစည်းတခုဖြစ်သော HRW ၏ အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ Kenneth Roth က မြန်မာအစိုးရ အဆင့်မြင့် အရာရှိများနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနောက် ယခုလ ၆ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ထိုသို့ ပြောကြားခြင်း ဖြစ်သည်။ HRW အဖွဲ့က ယခုနှစ်အတွက် ၎င်းတို့၏ ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ နှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေးကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျင်းပရန် ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၁ ခုနှစ် အရပ်သား အမည်ခံ အစိုးရတာဝန်ယူပြီးနောက်ပိုင်း ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများထဲမှ အရေးပါသည့် အချက်များကို အလေး ပေးဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ယခုလ ၅ ရက်နေ့က သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင့် နေပြည်တော်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော ဆွေးနွေးမှုသည်လည်း တိုးတက်မှုရှိကြောင်း Kenneth Roth ကပြောသည်။ သို့သော်လည်း အခြား တာဝန်ရှိသူများကမူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် စိတ်ဆန္ဒနည်းပါး ကြသည်ဟုလည်း သူကဆိုသည်။
“ကျနော်တို့ အချက်တော်တော်များများ ပြောခဲ့ကြပါတယ်။ သူကလည်း စိတ်ဝင်တစားဆွေးနွေးပါတယ်။ ဒါ ကြောင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို သူ လုပ်မယ်ဆိုတာကတော့ ရှင်းပါတယ်” ဟု Kenneth Roth က သမ္မတနှင့် တွေ့ဆုံမှုကို ပြန် ပြောပြသည်။
“ဒါပေမယ့် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် သမ္မတရဲ့ ထိပ်တန်းအကြံပေး ပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊ ကာကွယ်ရေး၊ ပြည်ထဲရေး၊ နိုင်ငံခြားရေး၊ ပြန်ကြားရေး စတဲ့ဌာနတွေက အရေးပါတဲ့ ၀န်ကြီးတွေနဲ့ တွေတဲ့အခါမှာတော့ တချို့က ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ဖို့ သေသေချာချာ ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ သူရှိသလို တချို့ကတော့ ဒါကို အရှိန်လျော့သွားစေချင်ကြတဲ့အတွက် အစိုးရ အဖွဲ့ထဲမှာ ကွဲနေတာ သေချာလာပါတယ်” ဟုလည်း သူကဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် မထုတ်ဝေမီ စာပေစိစစ်ရေးသို့ ကြိုတင် တင်ပြရသည့် စနစ်ကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ပယ်ဖျက်လိုက်ပြီး မီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့် တိုးတက်မှုရှိလာသည်ကို ချီးကျူးခဲ့သော်လည်း လတ်တလောအချိန်တွင် မီဒီယာများအပေါ် ဖိအားပေး နေခြင်းကို ထောက်ပြခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့် လအတွင်းက ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့နယ်တွင် အကြမ်းဖက်မှုတခု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ဒါဇင်နှင့် ချီသော ရိုဟင်ဂျာ မူဆလင်များ သေဆုံးခဲ့ကြောင်း လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့များနှင့် ကုလသမဂ္ဂတို့က သတင်းများထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးနောက် မြန်မာ အစိုးရက စွပ်စွဲမှုများကို ဒေါသတကြီးတုန့်ပြန်ခဲ့ပြီး သတင်းများကို ပယ်ချခဲ့သည်။ ထိုသတင်းကို ရေးသားခဲ့သည့် AP သတင်းဌာနမှ သတင်းထောက်များကိုလည်း ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဌာနသို့ ခေါ်ယူပြီး သတိပေးခဲ့သည်။
ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားပြီး နောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်ခဲ့သည့် မီးလောင်မှုတွင် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည်ဟု ဒီမိုကရက်တစ် မြန်မာ့အသံ သတင်းဌာသို့ပြောကြားခဲ့သော မွတ်ဆလင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးရွှေမောင်ကိုလည်း အစိုးရက စစ်ဆေး မေးမြန်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ထိုနည်းတူပင် မကွေးတိုင်း ပေါက်မြို့နယ်မှ စစ်တပ်ပိုင် ကာကွယ်ရေးပစ္စည်း စက်ရုံတရုံသည် ဓာတုလက်နက်များ ထုတ်လုပ်သည့် စက်ရုံတခုဖြစ်သည်ဆိုသော သတင်းရေးသားခဲ့သည့် Unity ဂျာနယ်မှ အမှုဆောင်အရာရှိတဦးနှင့် သတင်းထောက် ၄ ဦး ကို နိုင်ငံတော် လျှို့ဝှက်ချက် အက်ဥပဒေဖြင့် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ပြီး စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့် ရရှိရေး ဆောင်ရွက်သူများက ၎င်းတို့ကို ပြန်လွှတ်ပေးရန် တောင်းဆိုနေကြသည်။
အကြောင်းအရာ တစုံတခုကို ဦးတည်ရည်ညွှန်းခြင်း မပြုသော်လည်း Kenneth Roth က တာဝန်ရှိသူများ နှစ်ချိုက်ဖွယ်ရာ မရှိသည့် သတင်းရေးသားမှုများကို အစိုးရအနေဖြင့် သည်းခံပေးဖို့ တောင်းဆိုလိုက်သည်။
“စာနယ်ဇင်းဆိုတာ အစိုးရရဲ့ အာဘော်ကို ဖော်ပြပေးရတာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို ခုချိန်အထိ အစိုးရရဲ့ တချို့ အစိတ်အပိုင်း တွေက လက်မခံသေးပါဘူး။ မီဒီယာဆိုတာ အစိုးရနဲ့ စစ်တပ်အတွက် ၀ါဒ ဖြန့်ချီပေးရုံပဲ မဟုတ်ပါဘူး။ အစိုးရက သဘော မတူသည် ဖြစ်စေ၊ မိမိကိုယ်ပိုင် သဘောထားနဲ့ မတိုက်ဆိုင်သည်ဖြစ်စေ အရှိအတိုင်း လွတ်လပ်စွာ တင်ပြပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းမွန် ပြည့်စုံတဲ့ မီဒီယာ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ အသံတွေ၊ အချေအတင် ငြင်းခုန်မှုတွေ ရှိနေပါတယ်” ဟု သူကဆိုသည်။ “အဲဒါကို လက်ခံဖို့၊ ခြိမ်းခြောက်မှုတခုလို့ မမြင်ဘဲ လက်ခံသင့်တဲ့ အစဉ်အလာတခုလို့ လက်ခံဖို့က အခုမှ ပြောင်းလဲလာနေတုန်း ရှိသေးတယ်လို့ ကျနော်ထင်ပါတယ်။”
သူနှင့် HRW ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့က အစိုးရကို မီဒီယာနှင့် ပတ်သက်သည့် ဥပဒေသစ်များသည် မီဒီယာများကို စီမံခန့်ခွဲရာတွင် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ အရေးယူမှုမျိုး ဖြစ်မနေစေရန်လည်း တိုက်တွန်း ခဲ့သည် ဟု Kenneth Roth ကပြောသည်။
“သတင်း အမှားတွေရေးတယ်၊ သတင်း အမှားတွေရေးတယ်လို့ အစိုးရ တာဝန်ရှိသူတချို့က ပြောကြတာကို ကျနော်တို့ ကြားခဲ့ပါတယ်။ အစိုးရ အနေနဲ့ ဒီသတင်းတွေကို တုန့်ပြန်သင့်တယ်လို့ ကျနော်တို့ ဖြေခဲ့တယ်။ အပြန်အလှန် ငြင်းခုန်မှု ရှိရမယ်။ ရာဇ၀တ်မှု ဥပဒေရဲ့ ပြင်းထန်တင်းကျပ်မှုကနေ မဟုတ်ဘဲ ပြောဆိုငြင်းခုန်ရင်းကနေ အမှန်တရား ပေါ်လာ စေရမယ်” ဟုလည်း သူကဆိုသည်။
HRW ၏ အာရှဒေသဆိုင်ရာ အမှုဆောင် ဒါရိုတ်တာ Brad Adams ကလည်း ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သည့် အချိန်တွင် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းကို အရေးယူရန်အတွက် ရာဇ၀တ်မှု ဥပဒေများ မသုံးစွဲသင့်ကြောင်း တင်ပြရာ သဘောတူလက်ခံခဲ့ကြသည်ဟု ပြောသည်။
မြန်မာ အစိုးရနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ပဋိပက္ခများအပေါ်တွင် အစိုးရ၏ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမှုများနှင့် ပတ်သက်၍လည်း HRW က အလေးပေးဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့်လက ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟု ယူဆရသည့် အကြမ်းဖက် သတ်ဖြတ်မှု ကို ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ပေးသွားရန် ထပ်မံတောင်းဆိုခဲ့ကြောင်းလည်း Brad Adams ကပြောသည်။
ထို့ပြင် ကချင်ပြည်နယ်တွင် အစိုးရနှင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တို့၏ ပဋိပက္ခများ၏ ဒဏ်ကို ခံစားနေရ သည့် စစ်ရှောင် ဒုက္ခသည်များ အတွက် လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှု အကူအညီများရရှိနိုင်ရေး သေချာအောင် ဆောင်ရွက် ပေးရန် လည်း HRW အဖွဲ့ က အစိုးရကို တောင်းဆိုခဲ့သည်။ “ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီတွေ အဲဒီမှာရနေပါတယ်၊ လူတွေလည်း သွားနိုင်ပါတယ်လို့ ကျနော်တို့ကို ထပ်တလဲလဲ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့ လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ မိတ်ဖက်အဖွဲ့တွေဆီက ကြားရတာတော့ တခြားဖြစ်နေတယ်။ ဒါကို စစ်ဆေး ကြည့်ရမယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ်” ဟု Kenneth Roth ကပြောခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး အေဂျင်စီ ရုံးဖွင့်လှစ်ခွင့် ပြုမည်ဟု အမေရိကန် သမ္မတ အိုဘားမားကို ကတိပေးထားခဲ့သည့် အတိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးရန်လည်း သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကို တိုက်တွန်းခဲ့သည်ဟု Kenneth Roth က ပြောသည်။
ဘာသာရေး, လူမျိုးရေး, စော်ကားမှု, စာပေ, ဂီတ, ရုပ်ရှင်, သဘင်
ဖေ့ဘွတ်တွင်လည်း အထိန်းအကွပ်မဲ့ ဘာသာရေး လူမျိုးရေး စော်ကားမှုများ ပြန့်နှံ့နေသည် (ဓာတ်ပုံ- Reuters)
အခု နှစ်ပိုင်း ဗမာပြည်မှာ လူမျိုးရေး / ဘာသာရေး အသွင်ဆောင်ကာ မတူကွဲပြားတဲ့ လူအုပ်စုကြား ပဋိပက္ခတွေ များ၊ အမုန်းတွေ ပွား လာကြတော့ သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးက ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်တွေ တွေ့ဆုံပွဲ၊ ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးပွဲ၊ ဘာသာပေါင်းစုံ ချစ်ကြည်ရေးပွဲ စသဖြင့် လူ့အဖွဲ့အစည်း တည်ငြိမ်၊ ငြိမ်းချမ်း၊ ဖွံ့ဖြိုး ရေး အတွက် ရှေးရှု တတ်စွမ်းသလောက် ကြိုးစား ဆောင်ရွက်လာကြတာ တွေ့ရတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီနေရာမှာ သုံးသပ်ရမယ့် ကိစ္စ တခုက ဒီ အလုပ်တွေ ရဲ့ အကျိုးရလဒ်၊ ထိရောက်မှု ကို ပါ။ ဒီလို ဘာသာရေး အုပ်စု အသီးသီးက ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေ ရဲ့ အလုပ်တွေ၊ ပူးပေါင်းမှုတွေဟာ လူ့အဖွဲ့အစည်း က လူထု၊ လူတန်းစား၊ အလွှာ အသီးသီး ကို ဘယ်လို၊ ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာ အထိ သက်ရောက်စေသလဲ၊ အမုန်းတွေ၊ အထင်အမြင်လွဲမှုတွေ၊ ပဋိပက္ခတွေ ဘယ်လောက် လျော့နည်း ကျဆင်း သွားပြီလဲ ဆိုတာကို ပြန်လည် ထောက်ချင့်ရမှာပါ။
လူအများ ကြည်ညိုလေးစားသူ၊ ကိုးကွယ်သူ၊ သီလ၊ ကျင့်ဝတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သြဇာရှိသူ ခေါင်းဆောင်တွေ ကိုယ်တိုင် ဆင်း ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် ဖော်ဆောင်၊ ဆွေးနွေးပွဲတွေ လုပ်ဆိုတော့ စာနယ်ဇင်း တွေပေါ်မှာ သတင်းဖြစ်၊ ထင်ပေါ်၊ လူအများလည်း အသိမှတ်မှု အနည်း၊ အများ ရမယ်၊ ရှိမယ် ဆိုတာ သေချာတယ်။ ဒါပေမယ့် စာရေးသူ အမြင်အရတော့ အများကြီး ထိရောက်၊ အကျိုး ရှိတယ်လို့ မထင်ပါ။ တကယ့် ပြဿနာ ရင်းမြစ်ကို ဒီ တနည်းတည်းနဲ့ အလုံးစုံ ဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့ မယူဆပါ။
ဒီသဘော ကို အများ ကျေလည် နားဝင် ဖို့ရာက ဗမာလူ့အဖွဲ့အစည်း မှာ လက်ရှိ ဖြစ်တည်နေတဲ့ လူမျိုးရေး/ ဘာသာရေး အခြေပြု ဆက်စပ် ပြဿနာ သဘောကို အရင် ရှင်းမှ ရပါမယ်။ စာရေးသူ ရဲ့ မိုးမခ ဆောင်းပါးဟောင်းများနဲ့ ဆက်စပ်ဖတ်နိုင်ရင်တော့ ဆိုလိုချင်တဲ့ သဘောကို ပို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်နိုင်မယ် ယူဆရတယ်။
ဒီဆောင်းပါး မှာ ပြဿနာ ရဲ့ သဘော ကို အကျဉ်း ပြန် ဆွေးနွေးရရင် အခု ဖြစ်နေတဲ့ ဘာသာရေး/လူမျိုးရေး ပြဿနာတွေဟာ အများ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ယူဆ လက်ခံ ထားသလို နိုင်ငံရေး ပယောဂကြောင့်၊ အာဏာရ အသိုင်းအဝန်း က ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲလိုသူများ ရဲ့ ဖန်တီးချက်၊ ရွေးကောက်ပွဲ လိုအပ်ချက် ဆိုတဲ့ သဘောတခုတည်း ရှုမြင်လို့ မရပါ။ ဒီလိုသဘောတွေ အနည်း၊ အများပါတယ် ဆိုတာ မှန်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဗမာ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ တည်ရှိနေတဲ့ အမုန်းတွေ၊ အမြင်မကြည်လင်မှုတွေက ဒီသဘောထက် အများကြီး ပိုတယ်။ နက်ရှိုင်းတယ်။
နောက်တခုက လူတချို့ အကြောင်းပြချက်ပေးတဲ့ ဗမာ့ အနောက်တံခါးကို ကျူးကျော်၊ နယ်ချဲ့ သိမ်းပိုက်လိုသူ ဘာသာမတူ၊ လူမျိုးကွဲတွေကိုသာ မလိုမုန်းတီး လက်မခံနိုင်တာပါ၊ ပြည်တွင်း က နိုင်ငံသား ဘာသာခြား၊ လူမျိုးခြားများကို ဘာ သဘော မှ မရှိပါဘူး ဆိုတဲ့ အချက်ကလည်း အပြည့်အဝ မမှန်ပါဘူး။
အခု ဆိုခဲ့တဲ့ နှစ်ချက် အတွက် အကြောင်းပြချက် ပေးရရင် ဗမာပြည် မှာ ကြီးစိုးခဲ့တဲ့ စစ်အာဏာရှင်စနစ် ခေတ် အဆက်ဆက်မှာ အများစု အုပ်စုဝင် မဟုတ်တဲ့ လူနည်းစု ဘာသာဝင်၊ လူမျိုးစု ဝင် အစုစု အားလုံးဟာ အစဉ်အဆက် စနစ်တကျ ဖိနှိပ်ခွဲခြားမှုတွေကို ပုံစံမျိုးစုံ စီးပွား၊ ပညာ၊ ကျန်းမာ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အရေး အစရှိသလို ခံခဲ့ရတယ်။ မှတ်ပုံတင်ပေါ်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ လူမျိုး၊ ဘာသာ ဆိုတဲ့ အချက် က လူ တဦး၊ တယောက် ရဲ့ ဘဝ ကို အကြီးအကျယ် သက်ရောက်၊ လွှမ်းမိုးစေတယ်။ ဒါက လူအများစု ထောက်ခံမှုကို လိုချင်တဲ့အတွက် လူများစု နဲ့ လူများစု ဘာသာ သာသနာ ကို ကာကွယ်သူ၊ စောင့်ရှောက်သူ၊ ချီးမြှင့်သူ အဖြစ် ပုံဖော်ကာ ဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့ အာဏာကို ရေရှည်တည့်တံ့အောင် ဆောင်ရွက်တဲ့ စစ်အာဏာရှင် စနစ်က ပုံဖော် လမ်းကြောင်းခဲ့တဲ့ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး ဖိနှိပ်ခွဲခြားမှု ပုံစံပါ။
ဒီလို ပုံစံ ရာစုနှစ်ဝက် တိုင်းပြည်မှာ ကြီးစိုးရှင်သန်ခဲ့တော့ တိုင်းပြည်ရဲ့ ကဏ္ဍ အသီးသီး မှာလည်း ဒီလို သဘောက တည်ရှိနေသလို စနစ် ရဲ့ ဖွားဖက်တော် လူအများမှာလည်း ဒီလို လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး မတူညီမှု အပေါ် ကို ခွဲခြားမြင်၊ ပြုမူဆက်ဆံချင်တဲ့ သဘောက အနည်းအများ စွဲကပ်လာခဲ့ရတယ်။ ဒီလို သဘော၊ အမြင်၊ အယူအဆ၊ အသုံးအနှုန်းတွေ က လူတွေ အပေါ် လွှမ်းမိုးနိုင်မှု ရှိတဲ့ စာပေ၊ ဂီတ၊ ရုပ်ရုင်၊ ပညာရေး စနစ် အားလုံးလိုလိုမှာ သက်ရောက်နေတယ်။ ဒါကို အများအားဖြင့် လူအများ သတိမပြုမိ၊ အလေးမထားတတ်သလို၊ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ် သဘောပဲ ရှုမြင်တတ်ကြတယ်။
အခု ဆိုခဲ့တဲ့ သဘောမျိုးတွေကြောင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ ဘာသာရေး လူမျိုးရေး အပေါ် အခြေခံတဲ့ ခွဲခြား မြင်မှုတွေ၊ အထင်၊ အမြင် လွဲမှုတွေ၊ မလိုလားမှုတွေ၊ အမုန်းတွေက နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းကို ဝမ်းနည်းဖွယ် အမြစ်တွယ် တည်ရှိလာခဲ့ရတယ်။
ဒါကြောင့် အခု လူအများ ယူဆ ပြောဆို အဖြေရှာနေကြတဲ့ လက်ရှိ ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေး ပြဿနာတွေ ရဲ့ အကြောင်း က နိုင်ငံရေး ပယောဂ၊ အောက်လမ်းနည်း လုပ်ကြံမှု နဲ အနောက်နယ်ခြား က ပြဿနာ ကြောင့်က အဓိက မဟုတ်ဘူး၊ မမှန်ဘူး လို့ အထက်မှာ ဆိုခဲ့ရခြင်း ဖြစ်တယ်။ ဒီ နှစ်ခု က လက်ငင်းအကြောင်း၊ မီးစာ ကို တိုးစေတဲ့ အချက် ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် တကယ့် အရင်းခံ အကြောင်းမှာတော့ အထက်မှာ အကြောင်းပြ ဆိုခဲ့တဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်း ကိုယ်နှိုက်မှာကို စနစ်ဒဏ်ခံရင်းနဲ့ အမုန်းတွေက တွယ်ငြိ ခဲ့ရပြီ၊ ခွဲခြားမှု အမြင်တွေက အသားကျနေခဲ့ပြီ ဖြစ်တယ်။
ဒီသဘောကို ပထမ အချက် အနေနဲ့ အများ က လက်ခံရပါမယ်။ အကြောင်းက ရောဂါ ရဲ့ ဇာစ်မြစ်ကိုသိမှ ရောဂါကို ပျောက်အောင် ကုသနိုင်မှာမို့ပါ။
ဒီသဘောကို လက်ခံပြီးရင် ဆောင်းပါး မှာ အစပြု တည်လာခဲ့တဲ့ အဆို ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်တွေ ရဲ့ ဘာသာပေါင်းစုံ ချစ်ကြည်ရေး ဆွေးနွေးပွဲ တွေက အလုပ် သိပ် မဖြစ်ပါဘူး ဆိုတာကို နားလည်ဖို့ မြင်လွယ်လာမှာ ဖြစ်တယ်။ ဆက် ရှင်းပါ့မယ်။
ဘာသာရေး လူမျိုးရေး ခွဲခြားမှု အမြင်တွေ၊ အမုန်းတွေကို ဖြစ်စေတဲ့ သဘောတွေက ဆိုခဲ့သလို တိုင်းပြည်ရဲ့ နေရာအနှံ့မှာ ရှင်သန်နေခဲ့တာ ကြာပါပြီ။ သိသိသာသာ၊ မသိမသာ၊ လူတွေ သတိထားမိတာလည်း ရှိ၊ သတိမပြုမိတာလည်း ရှိ အမျိုးမျိုး ဖြစ်တည်နေတယ်။ အထူးသဖြင့် စွဲမြဲစေလို့ စွဲမြဲစေမှန်း မသိ၊ လွှမ်းမိုးခံရလို့ ခံရမှန်းမသိစေတဲ့ Soft Power ကြားခံပစ္စည်းတွေ ဖြစ်တဲ့ စာပေ၊ ဂီတ၊ ရုပ်ရှင်၊ သဘင် အနုပညာ ထုတ်ကုန်တွေနဲ့ ပညာရေး စနစ်မှာ ဘာသာ၊ လူမျိုး ကွဲချင်း အမုန်းပွားစေမယ့် အပြောအဆို၊ အသုံးအနှုန်း၊ အမြင်၊ သဘောထား နဲ့ သမိုင်း ဖန်တီးမှု၊ ပုံဖော်မှုတွေ က စွဲကပ်နေတယ်။
ဥပမာ – ရုပ်ရှင်တွေ၊ ဇာတ်တွေ၊ ဝတ္ထုတွေမှာ လူနည်းစု အုပ်စုဝင် အထူးသဖြင့် ဘာသာကွဲ ဆိုရင်၊ အထူးသဖြင့် ဌာနေ တိုင်းရင်းသား လို့ မသတ်မှတ်ကြတဲ့ ရွှေ့ပြောင်းအခြေချ နေထိုင်သူ လူမျိုးစုဝင် ဆိုရင် မကောင်းတဲ့ ပုံရိပ် တခုခု ပုံသေကားချပ်ချ ပုံဖော်တာမျိုးက အမြဲ မြင်တွေ့နေရတဲ့ ကိစ္စပါ။ ငွေတိုးချေးစားသူ၊ မောက်မာရိုင်းစိုင်းသူ၊ အဓမ္မ ကျင့်သူ၊ ရာဂကျူးသူ၊ အရက်သေစာ အလွန်အကျွံ သောက်သူ၊ ရာဇဝတ်ကောင်၊ လူဆိုး စသဖြင့် အမြဲ ဇာတ်ရုပ်ထား ပုံဖော်တယ်ကြတယ်။ အနည်းဆုံး အလုပ်အကိုင် နေရာ ဇာတ်ရုပ်ချရာမျိုးမှာတောင် ဒရဝမ်၊ မာလီ အဆင့်ထက် ပို မပေးတတ်ကြဘူး။ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ပီချေး ခမျာ တသက်လုံး မာလီ ဘဝ က ကို မတက်ခဲ့ရရှာပါဘူး။
ရွှေ့ပြောင်းအခြေချ နေထိုင်သူ (Migrants) လူနည်းစု လူမျိုးအုပ်စုဝင်များ ကို အထက်မှာ ဆိုခဲ့သလို ဌာနေ တိုင်းရင်းသား မဟုတ် ဆိုတဲ့ ယေဘုယျ အမြင် သတ်မှတ်မှု၊ တနည်း အိမ်ရှင်-ဧည့်သည် သဘော အမြင် (Mindset/Concept) ကိုလည်း ဒီမှာ ဆက်စပ် တပါတည်း ပြန်ထောက်ပြရရင် လူသား အားလုံး ဟာ လူ့ လောက ကို ဧည့်သည် အနေနဲ့ ခဏတာ အလည် လာရောက် နေထိုင်သူများပါပဲ။ ဘာသာရေး ရှုထောင့် နဲ့ ဆိုရရင် အားလုံးဟာ သံသရာ ခရီးသွား ဧည့်သည်ချည်းပါပဲ။ လူသား ယဉ်ကျေးမှု (Civilisation) ဖြစ်ပေါ် တိုးတက်လာမှု သမိုင်း အရ ကြည့်ရင်လည်း လူသားအားလုံး ဟာ ရှေး အစဉ်အဆက် တနေရာ ကနေ တနေရာ ရေကြည်ရာ၊ မြက်နုရာ ရွှေ့ပြောင်းသွားလာ နေထိုင်၊ အခြေချ ခဲ့ကြတဲ့ Migrants ချည်းပါပဲ။ မြန်မာလည်း Migrants မြန်မာ မဟုတ်သူလည်း Migrants ပါပဲ။ ဒီ ဌာနေတိုင်းရင်းသား အစွဲ၊ အိမ်ရှင်-ဧည့်သည် အခွဲ ရဲ့ အကြောင်း/အကျိုး မဲ့မှု၊ အမြင်ကျဉ်းမြောင်းမှု သဘောကို မြင်အောင်သာ စကားချပ် အနေနဲ့ ထည့်ဆိုခြင်းပါ။ ထားပါ။ Soft Power တွေမှာ အမြစ်တွယ်နေတဲ့ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး ခွဲခြားမှု အမြင်၊ သဘောတွေ ကိစ္စ ဆက်ပါမယ်။
စာပေ၊ သဘင်၊ ရုပ်ရှင် အားလုံး လိုလိုမှာ ချစ်တီး ဆိုရင် ငွေတိုးချေးစားသူ၊ မကောင်းသူ၊ အိန္ဒိယ အနွယ် နှာခေါင်းရှည်ရှည် ဆိုရင် မုဒိမ်းကောင်၊ လူယုတ်မာ၊ အနည်းဆုံး နှာဗူး၊ တရုတ် ပေါက်ဖော် ဆိုရင် စီးပွားသောင်းကျန်း၊ မောက်မာ ရိုင်းစိုင်းသူ၊ ရှမ်း၊ ကရင်၊ ကချင် ဆိုရင် သူပုန်၊ ဓားပြ အစရှိသလို ပုံဖော်မှု က အများစု ဖြစ်နေတယ်။
လူနည်းစု အနွယ်ဝင်တွေ ထဲက ချင်းမ၊ ရှမ်းမ၊ ကချင်မတွေ ဆိုရင် ပြုစားတတ်သူ၊ ဒါမှမဟုတ် ရဖို့ လွဲသူ စသလို မဟုတ်တယုတ်တွေလည်း ပုံဖော်တတ်ကြတယ်။
ကောင်းမွန်တဲ့ အဓိပ္ပာယ် နဲ့ အခြေတည်လာခဲ့တဲ့ စကားပုံ တချို့ကိုတောင် ကပြက်ကချော် ပြုရင်း လူမျိုးရေး ခွဲခြားမှုတွေ လုပ်တတ်ကြသေးတယ်။ ဥပမာ – “ရှမ်းရိုး လင်ကိုး” ကို မဟုတ်ကဟုတ်က အမြင်နဲ့ ရှမ်းမများ ရိုးတဲ့သူတောင် လင်ကိုးယောက် တော့ ယူတဲ့ သဘော လုပ်တတ်ကြတယ်။
ဒါတွေ အပြင် နောက်ထပ် ဆိုးတဲ့ အချက်တခုက စကားလုံး အသုံးတွေက အဆင့်မတန်း မရှိတာပါ၊ မတူကွဲပြားတဲ့ တဖက် လူအုပ်စု တခုခု ကို ထိခိုက်၊ နစ်နာ၊ ချိုးနှိမ် ရင့်သီး ဖြစ်စေတာမျိုးတွေ၊ အစွဲ ကောက်ချက်ချ အသုံးအနှုန်းတွေဟာ ဗမာပြည်က မီဒီယာ မျိုးစုံ၊ အထူးသဖြင့် အပေါစား ရုပ်ရှင်၊ ဗွီဒီယို တွေမှာ မြင်တွေ့ခဲ့ရ၊ မြင်တွေ့နေရတယ်။
(စကားချပ် – ဗမာ့ ရုပ်ရှင် ရဲ့ တသမတ်တည်း ပုံစံကားချပ်ချ ရုပ်လုံးဖော်မှုတွေက လူမျိုးရေး/ဘာသာရေး အခြေခံ မှ မဟုတ်၊ ဆင်းရဲသား (သို့မဟုတ်) ကျေးတောရွာသား ဆိုရင် အမြဲ မူးရစ်ရမ်းကားနေတတ်သူတွေ၊ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ဆိုရင် အမြဲ ဖွန်ကြောင်နေတတ်သူတွေ စသဖြင့် တလွဲ ပုံသေချ ပုံဖော်တတ်တာတွေ ရှိပါသေးတယ်။)
စာရေးသူ အနေနဲ့ တိုင်းရင်းသား ပြဿနာ အကြောင်း ဆွေးနွေးရင် ပြည်နယ်ဒေသတွေမှာ အခြေခံ အဆောက်အအုံ Infrastructure ချို့တဲ့မှုကို ထည့် ဆိုလေ့ရှိတယ်။ ချင်းပြည် မှာ ရုပ်ရှင်ရုံ ဆိုရင် ပြည်မ နဲ့ ယှဉ်ရင် အတော် နောက်ကျ မှ သာ ရှိလာတဲ့ အကြောင်းကို ဥပမာ ပြုပြရင်းနဲ့ တဖက်ကလည်း ဒါလည်း တမျိုး ကောင်းပါတယ်၊ ဗမာ့ရုပ်ရှင် ပြ လို့လည်း မတူကွဲပြားတဲ့ လူမျိုးစုချင်း ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု တိုးပွားဖို့ လမ်းထက် အမုန်းပွားဖို့ လမ်းက များပါတယ်လို့ အမြဲဆိုရတယ်။
တကယ်တော့ လူထု ဖျော်ဖြေရေး မှာ အဓိက ကျတဲ့ ရုပ်ရှင်ဟာ လူထု ပညာပေးရေး မှာလည်း အင်မတန် အရေးပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဘာသာစကား မတူသူ၊ စာပေ မတူသူတွေကြားကို ထိုးဖောက် ဝင်ရောက် ချင်ရင်၊ ထိစပ် နီးကပ်ချင်ရင် အရုပ် အဓိက နဲ့ ပုံဖော် တင်ဆက်တဲ့ အနုပညာ ကြားခံပစ္စည်း ရုပ်ရှင်က သိပ်အရေးကြီး၊ အရေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆိုခဲ့သလို ပဲ ဗမာ့ ရုပ်ရှင်၊ ဗွီဒီယို အဆင့်က ဆိုးလှတယ်။ နောက်ပိုင်းခေတ်တွေမှာ ပိုလို့ ဆိုးခဲ့တယ်။ နော်ရင်မွှေး ကို အကောင်း လုပ်ကြည့်ခဲ့ရတယ်။ အနုပညာ အား အပြည့် နဲ့ ကားတွေမှာ အကယ်ဒမီ မရခဲ့တဲ့ ဇင်ဝိုင်း တယောက် လက်နက်ချပြီး ကရင်သူပုန် (လူမိုက်ကြီး ပုံဖော်) လုပ်ပြတော့ မှ အကယ်ဒမီ ရခဲ့ရတယ်။
မတူကွဲပြားမှုတွေ၊ သဘာဝ အလျောက် အားနည်းမှုတွေကို အခြေပြုပြီး ချိုးနှိမ်မှု၊ ပြယ်ရယ်ပြုမှုက ဗမာ့ ရုပ်ရှင်မှာ အသားကျနေတာက ဗမာ့ ရုပ်ရှင် ပေါ်ဦးကတည်းကပါပဲ။ ကိုယ် ခန္ဓာ မကျန်းမာသူ၊ အင်္ဂါ ချို့တဲ့ သူ၊ စကားမပီသူ ကို လူပြက် လုပ်ခိုင်းတတ်ကြတယ်။ မိန်းမလျာ ဆိုတာ ဗမာ့ ရုပ်ရှင် နဲ့ ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းတွေမှာ ဖိနှိပ်စရာ၊ ဟာသ လုပ်စရာ အမြဲ ဖြစ်နေတယ်။ အသားအရောင်မည်းသူ ဟာ အမြဲတမ်း လူရာမဝင်သလို၊ ရယ်စရာ ဖြစ်နေသလို ပုံဖော်ကြတယ်။
ရပ်ထဲ ရွာထဲ မှာ ဆိုရင်လည်း အသား၊ အရောင် ညိုသူ၊ မည်းသူ ဆိုရင် ချစ်စနိုးနဲ့ ခေါ်ရင်တောင် ကပ္ပလီလေး၊ နီဂရိုးလေး၊ ကုလားလေး ဟေ့ လုပ်တတ်ကြတယ်။ ဒါမျိုး အသားအရောင် အပေါ် အခြေခံ ပြောဆို သုံးနှုန်းနေမှုတွေက မကောင်းတဲ့ အဓိပ္ပာယ်၊ နစ်နာလိုစိတ် မရှိဘူး ဆိုရင်တောင်မှ ရှောင်ရမယ်၊ မပြောဆို၊ မသုံးနှုန်းအပ်ဘူး ဆိုတာ ပညာတတ်၊ ပညာမတတ်၊ ပညာမတတ်တတတ် အားလုံး ဘယ်သူမှ အလေးဂရု မပြုတတ်ကြဘူး။
ဒီလို အသေးအဖွဲတွေ၊ အကြီးအမားတွေ အားလုံးဟာ မီဒီယာ ကြားခံ စုံမှာ၊ လူမှုအသိုင်းအဝန်းမှာ အသားကျ အမြစ်တွယ် နေခဲ့ပါပြီ။ ဒီလို အနေထားနဲ့ ဘယ်လို ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေး အခြေခံ ခွဲခြားမှုတွေ၊ အမုန်းတွေ ပျောက်အောင်လုပ်လို့ ရမလဲ၊ တိုင်းရင်းသား ပြဿနာ၊ လူနည်းစု ပြဿနာ ဘယ်ပုံ ဖြေရှင်းနိုင်မလဲ၊ “သွေးချင်းညီအစ်ကိုများ စည်းလုံးခြင်းရဲ့ အင်အား” အော်တတ်ပေမယ့် တဖက်ကလည်း “ကြီးမြတ်လေသော မဟာ မြန်မာ” စိတ် အခံ နဲ့ က ဘယ်လို ဒီ ပြဿနာ အစုစု ကို အမှန်တကယ် ပြီးမြောက် ဖြေရှင်း တိုင်းပြည် ငြိမ်းချမ်း ဖွံဖြိုးတိုးတက်စေမလဲ၊ “အာဇာနည် ဗုဒ္ဓဘာသာ အမျိုးသား တိုင်းပြည်” လုပ်ချင်၊ “မြန်မာစာ သည် တို့ စာ” လုပ်ချင်နေမှုတွေ နေရာတကာမှာ များမှတော့ ဘယ်လို ဘာသာရေး ပဋိပက္ခတွေ ကင်းနိုင်မလဲ၊ ပြည်တွင်းစစ်မီး ငြိမ်းနိုင် ပါ့မလဲ။
အဆိုးဆုံး အချက် ကတော့ ပညာရေး စနစ်မှာ ဘာသာ တခု၊ လူမျိုး တခု တည်း ကို စံ သတ်မှတ် ပြဋ္ဌာန်းခြင်းပါ။ ရှင်းအောင် ဆိုရရင် မြန်မာ လူမျိုး တမျိုး၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ တဘာသာ တည်းကိုသာ ဗဟိုပြု သင်ရိုးညွှန်းတမ်း တည်ဆောက်ထားခြင်းပါ။ တိုင်းပြည်မှာ မှီတင်းနေထိုင်နေသူ ဘာသာစုံ၊ လူမျိုးစုံ အားလုံးရဲ့ သဘော၊ သဘာဝ တွေ ကို ပညာရေး စနစ်မှာ လျစ်လျူရှု ချန်ထားမှု က လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း အမုန်းတွေ၊ ရန်ငြိုးတွေ၊ အာဃာတတွေ မလျော့နိုင်၊ မပျောက်နိုင်၊ ပဋိပက္ခတွေဖြစ်၊ စစ်မီးတွေ ဆက်လက် တောက်နေရခြင်း ရဲ့ အဓိက အကြောင်းကြီး တရပ် ဖြစ်တယ်။
မတူကွဲပြားသူချင်း ချစ်ခင် ရင်းနှီး၊ နားလည်မှု တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ဆိုတာက တယောက် နဲ့ တယောက် အရင် သိမှ၊ တယောက် ဓလေ့၊ ထုံးစံ၊ ယဉ်ကျေးမှု ကို တယောက် နားလည်မှ ဖြစ်နိုင်မှာပါ။ ဒါတွေကို ကလေး ဘဝ အခြေခံ ပညာရေး စနစ်မှာ လေ့လာခွင့် သိခွင့် မရခဲ့ရင် ဒီကလေး ကြီးတဲ့ အချိန် လူ့အဖွဲ့အစည်း အတွင်း ဝင်တဲ့ အခါမှာ မတူကွဲပြားမှုတွေကို လက်သင့်မခံနိုင်၊ မိမိနဲ့ မတူညီသူတွေကို နားမလည်နိုင် ဖြစ်ကာ အမြင်လွဲမှုတွေ အခြေတည်၊ အမုန်းတွေ ထားမိ လာခြင်းဟာ တကယ်တော့ မဆန်းလှပါဘူး။ ပညာရေး စနစ်ကမှ ငယ်စဉ်ကတည်းက ထိန်းကျောင်းပေးမှုမျိုး မရှိခဲ့တာကိုး။
မူလတန်းကနေ တက္ကသိုလ် အဆင့် အထိ သမိုင်း၊ မြန်မာစာ၊ ကြိုက်တဲ့ ပြဋ္ဌာန်း စာအုပ် တအုပ်အုပ်ကို ယူကြည့်ပါ။ ပဒေသရာဇ် ခေတ်စော် နံတဲ့ လူမျိုးရေး အသားပေး၊ မြန်မာ လူမျိုးကြီး ဝါဒ အခြေခံ စာ၊ ဗုဒ္ဓ ဘာသာ အခြေပြု စာ ဒါတွေပဲ အဓိက လွှမ်းမိုးနေတာ တွေ့မြင်ရမှာပါ။ “ဦးပေါင်းကျားနှင့် မြင်းကျားရှင်” လောက်နဲ့သာ အားလုံးဟာ ကြီးလာခဲ့ရတယ်။ လူနည်းစု အငွေ့အသက် သဘောပါတာဆိုလို့ “ရာဇာဓိရာဇ် အရေးတော်ပုံကျမ်း” ကို အကျဉ်း သင်ရတာမျိုးလောက်ပဲ ရှိမယ်။
တိုင်းပြည်ရဲ့ ဘာသာပေါင်းစုံ၊ လူမျိုးပေါင်းစုံ အကြောင်းကို၊ လူသားအားလုံး၊ လူမျိုးအားလုံး ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကို အထက်မှာ ထောက်ပြခဲ့သလို လူထု ဆက်သွယ်ရေး ကြားခံ ပစ္စည်း စာပေ၊ သဘင်၊ ဂီတ၊ ရုပ်ရှင် အားလုံမှာလည်း ပုံမဖော်နိုင်၊ အကျိုးထက် အပြစ်က များနေတဲ့ တင်ဆက်မှုတွေ အပြည့် ဖြစ်နေ၊ ဆိုခဲ့သလို ပညာရေး စနစ်မှာလည်း ထည့်သွင်း မသင်ပြနိုင်၊ ဒီလို အနေအထား နဲ့ တိုင်းပြည်မှာ ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေး အခြေခံ ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေ ကမ္ဘာ့ စံချိန်တင် ရာစုဝက်ကျော် ချီ ဖြစ်နေတာ၊ လူအုပ်စုလိုက် ပဋိပက္ခတွေ ကမ္ဘာကျော် ဖြစ်နေတာဟာ နည်းတောင် နည်းသေးတယ်လို့တောင် ဆိုရမလိုပါပဲ။
ဒီ ရုပ်ရှင်၊ သဘင်၊ စာပေ၊ ဂီတ နဲ့ ပညာရေး စနစ်လို လူအများကို အင်အားတရှိ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သက်ရောက်စေတဲ့ Soft Power မျိုးကို စာရေးသူ အနေနဲ့ ခပ်ရိုင်းရိုင်း အသုံး နဲ့ လူအများ နားစွဲအောင် ဆိုရရင် မရိုသေ့စကား “ပျော့ပျော့ ပျော့ပျော့ နဲ့ နံတတ်တဲ့ ကြောင်ချေး” တွေလို့ သတ်မှတ်တယ်။ ရုတ်တရက် အပေါ်ယံ အမြင် သဘောနဲ့ ထိရောက်မှု မရှိဘူးလို့ ထင်စေနိုင်ပေမယ့် လူကြားကို၊ လူအများကို ထဲထဲဝင်ဝင်၊ နက်နက်ရှိုင်းရိုင်း အရိုးစွဲ၊ လွှမ်းမိုးစေတာက ဘာသာရေး အဆုံးအမ အပြင်မှာ ဒီ အနုပညာ နဲ့ ပညာရေး ကဏ္ဍ နှစ်ခုက အဓိက ပါပဲ။
ဒီလို အစွမ်းထက်တဲ့ ကြောင်ချေး တွေမှာ ဆောင်းပါး တလျှောက် ဆိုခဲ့သလို အပြစ်အနာအဆာတွေ၊ ပြဿနာကို အစပြုစေတဲ့၊ ကြီးထွားစေတဲ့၊ ရေရှည်စေတဲ့ သဘောတွေ အပြည့် ဖြစ်နေတယ်။
ဆိုတော့ ဒီ ကြောင်ချေးများကို အရင် ရှင်းလင်း သုတ်သင် ပြင်ဆင်မှသာ ဗမာလူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ စွဲကပ်နေတဲ့ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး အခြေခံ တဲ့ ပြဿနာတွေ၊ အမုန်းတွေ၊ ရန်ပွဲတွေ စစ်ပွဲတွေက အလုံစုံ ရပ်တန့် ဖြေရှင်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်။
နိဂုံးချုပ်ရရင် ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များ ဘာသာပေါင်းစုံ ချစ်ကြည်ရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး ပွဲတွေ လုပ်နေကြတာ ကောင်းပါတယ်၊ လုပ်လည်း လုပ်ရပါမယ်။ ဒါပေမယ့် ရောဂါ ပြဿနာ ရင်းမြစ်ကို ကုစားနိုင်ဖို့ရာကတော့ ဆိုခဲ့တဲ့ Soft Power ကဏ္ဍ အသီးသီး မှာ မလိုလားအပ်တဲ့ အတွေးအခေါ်တွေ၊ သဘောထားတွေ ကို ဖယ်ထုတ်၊ အမုန်းပွားစေမယ့် အပြောအဆို၊ အကြောင်းအရာတွေကို တားမြစ်၊ ဘာသာစုံ၊ လူမျိုးစုံ ရဲ့ ဓလေ့၊ ထုံးစံ တွေ ကို သွတ်သွင်း၊ ဘာသာတခုတည်း၊ လူမျိုးတခုတည်း ချီးမြှောက် နေမှုတွေကို ရပ်၊ ဘာသာစုံ၊ လူမျိုးစုံ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကို ရှေးရှုတဲ့ စာတွေ၊ အနုပညာ ပစ္စည်းတွေ များများ ဖန်တီး၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ အသားအရောင်၊ ကျား-မ၊ လိင်၊ လိင်တိမ်းညွတ်မှု စတဲ့ မတူကွဲပြားမှု အားလုံးကို ပိုမို သည်းခံ နားလည်ပေးနိုင်မှုကို ကဏ္ဍ အသီးသီးမှာ လမ်းကြောင်းပေး စတဲ့ လူအများရဲ့ အမြင်၊ သဘောထား၊ အတွေးအခေါ် ကို အကောင်းဘက် ပြောင်းလဲလာစေမယ့်၊ ရေရှည်လည်း စွဲမြဲ တည်တံ့ စေမယ့် အချက်တွေကို ဇောင်းပေး ဖော်ဆောင်၊ လုပ်ဆောင်မှ ရမှာ ဖြစ်တယ်။
စာရေးသူ သည် သြစတြေးလျနိုင်ငံတွင် အိုင်တီ နှင့် စီးပွားရေး မဟာပညာရပ်များကို လေ့လာသင်ယူခဲ့ပြီး ခေတ္တ နေထိုင်လျက်ရှိကာ အွန်လိုင်း မီဒီယာ များတွင် မျက်မှောက် ရေးရာ နှင့် အထွေအထွေဆောင်းပါးများ ရေးသားနေသူ တယောက် ဖြစ်သည်။ ဆက်သွယ်လိုသူများ [email protected] ထံ စာရေးဆက်သွယ်နိုင်သည်။
နိုက်ဂျီးရီးယား၊ အနမ်ဘရာပြည်နယ်မှ စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုမှာ လူသားဖြင့် ဟင်းလျာများချက်ပြုတ်ရောင်းချနေကြောင်း အာဏာပိုင်များမှ လက်ပူးလက်ကြပ်တွေ့ရှိပြီးနောက် ယင်းဆိုင်အား ပိတ်စေခဲ့သည်။
နိုင်ငံတကာလုပ်ငန်းရှင်များ ရင်းနှီးမြုပ်နှံရန် စိတ...
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် ကမ္ဘာ့ဘဏ် က...
သမီးကလေးကျေးရွာကို သွားရောက်သတင်းယူသည့် သတင်းထောက်...
ယာဉ်တိုက်မှုကို မှတ်တမ်းတင် ဓာတ်ပုံရိုက်၍ ယာဉ်မောင်...
အလေးမလေ့ကျင့်ခန်းက အခြားလေ့ကျင့်ခန်းများထက် အမျိုး...
Steve Wozniak တွေးတဲ့ Apple သည့် Android စမတ်ဖုန်း...
မီးပ္ပိုင့် ပိတ်ဆို့မူတွေကို ထောက်လှမ်းပေးမဲ့ Conce...
လေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ရန် ရခိုင်မှစီမံကိန်းနေရာ (၁၀...
ဆီးရီးယားရှိ အယ်လ်ကေဒါ စစ်ဆင်ရေးများတွင် အီရန်မှ က...
သိပ္ပံပညာရှင်များ သက်တမ်း နှစ်ပေါင်း ရှစ်သိန်းကြာေ...
တနှစ်ခွဲကြာ ၀န်းရံပိတ်ဆို့မှု ခံခဲ့ရတဲ့ ဆီးရီးယားြ...
ကမ္ဘာ့ဖလား ကျင်းပမည့် ဘောလုံးကွင်းစီမံကိန်းနှင့် မလ...
အမှန်တကယ်နေရာစရမရှိတဲ့ သူတွေကို နေစရာရှာပေးပြီးမှ ...
ပျောက်ဆုံးနေသော ဗုဒ္ဓဓာတ်တော်ကြုပ် ကမ္ဘောဒီးယားရဲတပ်...
မလေးရှားတွင် လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခြင်းခံရသော ကိုအောင်ကြီ...
သစ်မှောင်ခိုသမားလေးဦးက သစ်တောဝန်ထမ်းသုံးဦးကို ရိ...
ကျွန်းသစ် အလုံးလိုက်ပြည်ပပို့မှု သုံးပုံတစ်ပုံခန့် ...
ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင် လမ်းလျှောက်နေသူအား ယာဉ်တိုက်မိသေ...
ကမ္ဘာ့အားအကြီးဆုံး သတ္တဝါ ဖြစ်သော နွားချေးပိုးကောင်
ဆရာတော်များ၏ ဆုံးမစာများ (၂)
သောက်သုံးရေ အလုံအလောက် မရရှိသော မြို့နယ်များသို့ေ...
ကိုသာကောင်း နှင့် မယ်လိုဒီတို့ရဲ့ မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲ.
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှာ ဖတ်ရှုရတဲ့ ကာတွန်းများ (၈-၂-၂၀၁၄)
မြန်မာလူငယ်တွေ စီးမျောနေတဲ့ အကနဲ့ ဘဝ ခွန်အားတစ်ရပ်လား
တိုယိုတာ ဟိုင်းလပ်စ်တွေ ရန်ကုန်အမြန်ယာဉ်ဘဝက ဇာတ်သိ...
မလေးတွင် သတ်ဖြတ်ခံရသူကိုအောင်ကြီးမှာ ရခိုင်လူမျိုး...
သတိ ... ပျင်းတတ်သူများလည်း အောင်မြင်ခွင့်ရှိသည်
မညီညွတ်လို့ အိမ်ကြက်ချင်း ခွပ်ကြမှုနဲ့ ပြည်ပရောက်ြ...
(၅၃) အထူးယာဉ်ကြီး ပလက်ဖောင်းပေါ်တက် သစ်ပင်ကိုဝင်တိုက်
ဓမ္မစေတီ ခေါင်းလောင်းကြီးအား ရှာဖွေနေဆဲ ဖြစ်ပြီး အမ...
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လေအားလျှပ်စစ် ထုတ်လုပ်နိုင်ရန်ေ...
ပျိုမေ တိုင်း လေ့ကျင့် ရမည့် နည်းလမ်းကောင်း (၅ )...
၂၁ ရာစု Facebook ရီဗျူး
အင်တာနက်ဆိုင်မှာ သုံးရင် ဒါကို သတိထားပါ
ဟောင်ကောင်မှာ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်အတွင်းက အမေရိကန်တို့ ကြ...
ဈေးပေါပေါထိုင်းအင်တာနက် နဲ့ ဈေးကြီးကြီး မြန်မာ့အ...
မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Look Back ဗီဒီယိုမှာ ကိုယ်စိတ်ကြိုက...
ဒီလိုကြုံမှမကြုံဖူးပဲဟာ - ဟာသ
အိမ်အဖျက်ခံရသည့် သမီးကလေးရွာသားများ ဘုန်ကြီးကျောင်...
မလေးရှားမှာ ရခိုင်တိုင်းရင်းသား ကိုအောင်ကြီး အသတ်ခံရ
မြန်မာ့ မိုးဝေ ဇာတ်သဘင်၏ ခေါင်းဆောင်မင်းသား ဇာတ်ခံ...